လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သုကုမာရဘာသာကို ဆရာလေးသီလရှင် ဝတ်တဲ့နှစ်မှာ စပြီးသင်ခဲ့ရပါတယ်၊သီလရှင်ဝတ်စတုန်းကတော့ မပျှော်ရင် ၁နှစ်တော့ဝတ်မယ်၊ ပျှော်ရင်တော့ ၃ နှစ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့၊ သီလရှင်ဝတ်မယ်ပြောတော့ အားလုံးကသဘော မတူပါဘူး၊ အတိတ်ကရေစက်ကြောင့်လားတော့အသိဘူး၊ အခုသီလရှင်ဝါ- ၁၃-ဝါရှိသွား ပါပြီ၊ သုကုမာရဘာသာက မူလတန်းတုန်းကသင်ခဲ့ရတာပါ၊ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကဗျာလေးတွေလိုကျက်ပြီး မှတ်ရလို့ပါ၊ စာပြန်တော့မယ်ဆို အလုအယက်ဘဲ ၊ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတော့ ၊ သီလရှင်ဘဝလေးမြဲသွား တာလဲ သုကုမာကြောင့်လို့ဘဲဆိုချင်ပါတယ်၊ အားလုံးလည်းသုကုမာရကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
Publish at Scribd or explore others: Fiction Books history writing
သုခကာမီ ပညာရေးကျောင်း ကထိန်ပွဲ
ကျိုးပြစ်မသိ၊ မရှိဥာဏ၊ မိုက်ဝါဒနှင့်၊ လူ့ဗာလမျိုး၊ လနေမိုးကို၊ မျက်ငြိုးငြူစူ၊ ဆဲရေးမူလည်း၊ ဆဲသူလူနွမ်း၊ သွမ်းသာသွမ်း၏၊ သွားလမ်းအညီ၊ ရာသီပက္ခ၊ ကာလမရွေ့၊ သာလေ့ပူလေ့၊ ရွာမြဲလေ့တိုင်း၊ ပြကတေ့အရိုး၊ လနေမိုးတို့၊ နွမ်းညှိုးဂုဏ်ဝါ၊ ဘယ်ပျက်ရာလိမ့်။ (ပုဒ်ရေ ၂၆၃)
လောင်ခြစ်ပွက်ဆူ၊ မျက်ထွက်သူကို၊ တုံ့မူအမျက်၊ ပြန်မထွက်က၊ အောင်ခက်နိုင်ခဲ၊ စစ်မြေထဲဝယ်၊ အောင်ပွဲရသည်၊ သူဟုမည်ရှင့်၊ မကြည်စိတ်စက်၊ အမျက်ထွက်သူ၊ ထိုသည့်သူနှင့်၊ အတူပြန်လျက်၊ မျက်မာန်ထွက်သော်၊ ရှေ့ထက်နောက်လူ၊ မိုက်သောဟူ၏။ (ပုဒ်ရေ ၂၆၃)
မူနည်ယုတ်မာ၊ ကြမ်းကြုတ်စွာဖြင့်၊ ဣသာသဘော၊ ပြန့်ပြောများသူ၊ ခွေးနှင့်တူ၏၊ ခွေးဟူတုံက၊ လှမလှနှင့်၊ ဟီနဥက္ကဋ္ဌ်၊ ယုတ်မြတ်လူရှင်၊ ပျိုအိုသွင်လည်း၊ မြင်မြင်သမျှ၊ သွားကိုပြ၍၊ ဒေါသမျက်ဆူ၊ ဟိန်းငြူစူ၏။ (ပုဒ်ရေ ၂၃၅)
လောဘဒေါသ၊ မောဟအဟုန်၊ ဆတ်ဆတ်ခုန်၍၊ သည်းတုန်အူလှိုက်၊ မမူထိုက်ရှင့်၊ သူမိုက်သဘော၊ စရိုက်ပြောလျက်၊ ကုဒ္ဓေါဓမ္မံ နဇာနာတိ၊ အစရှိသား၊ ပါဠိဒေသနာ၊ ဟောမိန့်မှာတိုင်း၊ မှန်စွာစင်စစ်၊ ဒေါသဖြစ်က၊ ကျိုးပြစ်တရား၊ မသိငြားဘူး။ (ပုဒ်ရေ ၂၃၄)
ရထားစက်ဟုန်၊ လည်သုန်သုန်ကို၊ မတုန်မလှုပ်၊ တည်စေချုပ်သို့၊ ဟုပ်ဟုပ်အမျက်၊ ကောဓစက်ကို၊ ဥာဏ်လက်သိမ်းအုပ်၊ လည်မလှုပ်အောင်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ငြား၊ ထိုသူ့အားလျှင်၊ ဘုရားတကာ၊ အရိယာတို့၊ လွန်စွာ မငြီး၊ ဘ၀ဂ်တီးအောင်၊ ကောင်းချီးခေါ်ပြု၊ သာဓုထပ်မျှ၊ ချီးမွမ်းကြ၏။ (ပုဒ်ရေ ၂၃၄)
ဗာလအလို၊ သ၀န်တိုနှင့်၊ ကိုယ်ကိုထောင်လွှား၊ အမြတ်ထား၍၊ သူ့အားနှိမ့်ချ၊ ပြုတတ်ကြမူ၊ မလှကျိုးမဲ့၊ ဂုဏ်ချို့တဲ့လျက်၊ ကဲ့ရဲ့ဘေးဒဏ်၊ ကိုယ်ကိုပြန်ပြီး၊ ဧကန်မုချ၊ ဒုက္ခကိုယ်မှာ၊ ရောက်တတ်စွာခဲ့…. (ပုဒ်ရေ ၂၀၃)
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 8:500comments
ကောလဟာလဟူသည် အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဤသို့ဖြစ်တော့မည်တဲ့ဟု မဖြစ်မီကကြိုတင်၍ သတင်းစကား
တစ်ဦး နှစ်ဦးကစ၍ အများအပြားစုပေါင်းကာ စကားတူ အသံတူ ရုတ်ရုတ်ရက်ရက် ပြောဆိုကြခြင်းမျိုးကို ဆိုလို
ဤအရာတွင် နောက်နောင်အခါ အမှန်မုချ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို မဖြစ်ပေါ်မီဝေးလံစွာသော အချိန်ကာလ
ကြိုတင်၍ ရှေးပြေးနိမိတ်အနေဖြင့် လူအများစုရုံကာ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ပြောဆိုကြခြင်းမျိုးကိုသာ
ကောလဟာလ ဟူ၍ဆိုလိုသည်၊ထိုထိုမြို့ရွာစသည့်တို့၌ ရောက်တတ်ရာရာ အမှန်လည်းမဖြစ်လာနိုင်ပါပဲလျှက်
စကြာမင်း ပေါ်တော့မည်တဲ့ အစရှိသည်ဖြင့်အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ရုတ်ရုတ်ရက်ရက် ပြောဆိုကြခြင်းမျိုးကို
လောက၌ ကြိုတင်၍ နိမိတ်ရှေ့ပြေးအနေဖြင့် ထိုအုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်ခြင်း ကောလဟာလသည်-
ကဗ္ဘာကြီး ပျက်တော့မည်ဟု အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်ခြင်းကို ကပ္ပကောလာဟလဟူ၍ခေါ်ဆို၏။ကဗ္ဘာပျက်လုနီးလာသော
အခါ မပျက်မီနှစ်ပေါင်းတသိန်းက ကြိုတင်၍ လောကဗျူဟာ အမည်ရှိသော ကာမာဝစရနတ်တို့သည် နိမြန်းသောအဝတ်တို့ကို
ဝတ်ဆင်ကြပြီးလျှင် ဆံပင်ကိုဖားယားချကုန်၍ ငိုယိုသောမျက်နှာမှ မျက်ရည်တို့ကို သုတ်ကာသုတ်ကာအလွန်မသက်သာသော
အသွင်အပြင် အခြင်းအရာတို့ဖြင့် လူတို့သွားလာရာ ခရီးလမ်းတို့၌ လှည့်လည်ကြကုန်လျှက်---
အချင်းတို့…. ဤနှစ်မှစ၍နောက် အနှစ်တသိန်းလွန်သော အခါ၌ ဤကဗ္ဘာလောကကြီးသည်ပျက်စီးတော့ပေမည်၊မဟာသမုဒ္ဒရာ
ပျက်စီးကုန်လိမ့်မည်၊(လေဖျက်မည့်ကဗ္ဘာဖြစ်လျှင်)လေပြင်းလေကြမ်းတိုက်ခတ်၍ ပျက်စီးကုန်လိမ့်မည်၊မြင်းမိုရ် သမုဒ္ဒရာတို့၏
တည်ရာ ဤမဟာပထဝီမြေကြီးမှသည် ဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင် ဤကဗ္ဘာလောကကြီး ပျက်စီးလိမ့်မည်၊အိုအချင်းတို့…သင်တို့
ဥပေက္ခာဗြဟ္မစိုရ် တရားကိုပွားများကြကုန်လော့။အမိ အဖတို့ကို ရိုသေစွာ ပြုစုလုပ်ကြွေးကြကုန်လော့၊သက်ကြီးသူအို
ရိုသေထိုက်သူတို့ကို ရိုသေကြကုန်လော့၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ အစဉ်နှိုးကြားကြကုန်လော့၊မမေ့မလျော့ကြကုန်လင့်….
ဟူ၍ အနှံ့အပြား လူအပေါင်းတို့ကြားသိလောက်အောင် ကြွေးကြော်ကြကုန်၏၊ဤသို့ကြွေးကြော်သည်ကို အကြောင်းအစပြူ၍
ကဗ္ဘာကြီးပျက်တော့မည်တဲ့…ကဗ္ဘာကြီးပျက်တော့မည်တဲ့ ဟူ၍ လူအများစုရုံးကာ နေရာအနှံ့အပြား၌ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်
ပြောဆိုကြခြင်းကို ကပ္ပကောလာဟလ ဟူ၍ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
လူ့ပြည်လောက၌(အရံကျွှန်းငယ်နှစ်ထောင်နှင့်တကွ ကျွှန်းကြီးလေးကျွှန်း လူ့ပြည်တဝှန်းလုံးကို သိမ်းကျူံး
အစိုးရသော စကြဝတေးမင်း ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်တဲ့ ဟုလူအပေါင်းတို့ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်ခြင်းကို
စက္ကဝတ္တိ ကောလာဟလဟူ၍ ခေါ်ဆို၏။လူ့ပြည်လောက၌ စကြဝတေးမင်း ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်ကို ကြိုတင်
သိရှိကြကုန်သော လောကပါလ ကာမာဝစရနတ်တို့သည် သကြဝတေးမင်း မဖြစ်ပေါ်မီ နှစ်ပေါင်းတရာက
ကြိုတင်၍ လူတို့သွားလာရာခရီးလမ်းမတို့၌ လှည့်လည်ကြကုန်လျှက်…
အချင်းတို့…ဤနေ့မှနောက် နှစ်ပေါင်းတရာ စေ့ရောက်သောအခါ ဤလူ့ပြည်လောက၌ စကြဝတေးမင်း
ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာ လိမ့်မည် ဟူ၍ အနှံ့အပြား လူအပေါင်းတို့ ကြားသိလောက်အောင် ကြွေးကြော်ကြ
ကုန်၏။ဤသို့ကြွေးကြော်ကြသည်ကို အကြောင်းအစပြု၍ စကြဝတေးမင်း ပေါ်တော့မည်တဲ့…စကြဝတေးမင်း
ပေါ်တော့မည်တဲ့ ဟူ၍ လူအများစုရုံကာ နေရာအနှံ့အပြား၌ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ပြောဆိုခြင်းကို စက္ကဝတ္တိ
ကောလာဟလ ဟူ၍ ခေါ်ဆို၏။
လူ့ပြည်လောက၌ဘုရားပွင့်တော့မည်တဲ့ဟု လူအပေါင်းတို့ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်ခြင်းကိုဗုဒ္ဓကောလာဟလ
ဟူ၍ခေါ်ဆို၏၊ လူ့ပြည်လောက၌ သဗ္ဗညူမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ထွန်းတော်မှုလာတော့မည်ကို ကြိုတင်သိရှိကြကုန်
သော သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာကြီးတို့သည် ကိုယ်၌ ဗြဟ္မာတို့၏ အဝတ်အစား အဆင်တန်းဆာတို့ကို ဝတ်ဆင်ကြကုန်၍
ဦးခေါင်း၌ ဗြဟ္မာတို့၏ မကိုဋ်သရဖူကို ဆောင်ကြကုန်ပြီးလျှင် ကြည်လင်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်သော စိတ်ရှိကြ
လျှက် ဘုရားမပွင့်မီ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကပင် ကြိုတင်၍ လူတို့သွားလာရာ ခရီးလမ်းမတို့၌ လှည့်လည်ကြ
အချင်းတို့…ယနေ့မှနောက် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် စေ့ရောက်သောအခါ ဤလူ့ပြည်လောက၌ သဗ္ဗညူ
မြတ်စွာဘုရား ထင်ရှားပွင့်ပေါ်တော် မှုလိမ့်မည် ဟူ၍ အနှံ့အပြား လူအပေါင်းတို့ ကြားသိလောက်အောင်
ကြွေးကြော်ကြကုန်၏၊ ဤသို့ ကြွေးကြော်ကြသည်ကို အကြောင်းအစုပြု၍ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မှုတော့မည်
တဲ့… မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မှုတော့မည်တဲ့ ဟူ၍လူအများစုရုံးကာ နေရာအနှံ့ အပြား၌ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်
ပြောဆိုကြခြင်းကို ဗုဒ္ဓကောလာဟလ ဟူ၍ ခေါ်ဆို၏။
(ဤဗုဒ္ဓကောလာဟလအရာ၌ ဘုရားမပွင့်မီ အနှစ်တစ်ထောင်က ကြိုတင်၍ ဗုဒ္ဓကောလာဟလ ဖြစ်ပေါ်လာ
၏ ဟူသော စကားကို ပွင့်တော်မှုလတံ့သော ဘုရားရှင်တို့၏ အသက်တမ်း ခေတ်အားလျှော်စွာ သာလျှင်
မိန့်ဆိုသောစကားဟူ၍ မှတ်သားရာ၏။ပွင့်တော်မငကြမည့် ဘုရားရှင်ဟူသမျှအတွက် အသက်တမ်းခေတ်ကို
မငဲ့ဘဲ မ်ိန့်ဆိုသော သာမညစကားဟူ၍ မမှတ်သားရာ။ အကြောင်းကိုဆိုသော်…အသက်တမ်းရှည်သောခေတ်၌
ပွင့်တော်မှုကြသည့် ဒီပင်္ကရမင်းသား၊ကောဏ္ဍညမင်းသား၊မင်္ဂလမင်းသား စသည်တို့မှာ ဘုရားဖြစ်ရန် လူ့ပြည်
သို့သက်ဆင်း၍ လူအဖြစ်ဖြင့် မင်း၏စည်းစိမ် ချမ်းသာကို နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းခန့် ကိုးထောင်ခန့်စသည်
ကြာမြင့်အောင် ခံစံပြီးမှ တောထွက်၍ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မှုကြကာ ဘုရားဖြစ်တော်မှုကြကုန်၏၊
ဗုဒ္ဓကောလာဟလမှာလည်းအစဦးစွာ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှ ထိုကောလဟလအရ စကြာဝဠာတိုက်သောင်း
ရှိနတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ အလောင်းတော်နတ်သားထံ ချဉ်းကပ်တောင်းပန်းကြမြဲဖြစ်၏။ထိုသို့တောင်းပန်ကြမြဲ
ဖြစ်၏။ထိုသို့တောင်းပန်၍ အလောင်းတော်နတ်သား၏ဝန်ခံချက်ကိုရမှသာ သုဒ္ဓါဝါသ ဗြဟ္မာကြီးတို့ လူ့ပြည်
လောက၌ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသည့်နောက် နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်မက ငါးထောင်မက နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းခန့်
ကိုးထောင်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးမှ သက်တော်ရှည် မြတ်စွာဘုရားတို့ ပွင့်တော်မှုကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓကောလာဟလ အတွက်
အနှစ်တထောင် ဆိုသောစကားကို ဘုရားရှင်တိုင်းအတွက် မိန့်ဆိုသောစကားဟူ၍ မမှတ်ယူဘဲ ဂေါတမမြတ်စွာ
ဘုရားကဲ့သို့ သက်တမ်းတိုးတော်မှုကြသော ဘုရားရှင်တို့အတွက်သာ မိန့်ဆိုသော စကားဟူ၍ မှတ်သင့်ပေ၏။)
မင်္ဂလာတရား၏ သဘောသွား အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို အတိအကျအမှန်အတိုင်း မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဘဲလျက် သူတစ်မျိုး ငါတစ်မျိုး လူအများစုရုံကာ ဤအရာကို မင်္ဂလာတရားခေါ်၏၊ဤအရာကို မင်္ဂလာတရားခေါ်၏ ဟူ၍
မိမိတို့ထင်မြင်ရာ ကိုမင်္ဂလာတရားဟု အသီးသီး ပြောကြားကြကာ မင်္ဂလာတရားဟူသည် ဤအရာတဲ့ ဟူ၍
အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်ခြင်းကို မင်္ဂလာကောလာဟလ ဟူ၍ခေါ်ဆို၏၊ဤလူ့ပြည်လောက၌ မင်္ဂလာတရား
တော်ကို မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မှုလိမ့်မည်ကို ကြိုတင်သိရှိကြကုန်သော သုဒ္ဓါဝါသ ဗြဟ္မာကြီးတို့သည်
မင်္ဂလာတရားကို လိုလားတောင့်တကြသည့် လူတို့၏ စိတ်အကြံကို သိကြကုန်သဖြင့် မင်္ဂလာတရားကို
မြတ်စွာဘုရား မဟောကြားမီ တဆယ့်နှစ်နှစ်ကပင် ကြိုတင်၍ လူတို့သွားရာ ခရီးလမ်းမတို့၌လှည့်လည်ကြကုန်
လျှက်…..အချင်းတို့…ယနေ့မှနောက် တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် စေံရောက်သောအခါ မင်္ဂလာတရားကို မြတ်စွာဘုရား
ဟောကြားတော်မှုလိမ့်မည် ဟူ၍ အနှံ့အပြား လူအပေါင်းတို့ကြားသိလောက်အောင် ကြွေးကြော်ကြကုန်၏။
ဤသို့ ကြွေးကြော်ကြသည်ကို အကြောင်းအစပြု၍ မင်္ဂလာတရားနှင့်စပ်၍ လူအများ စုရုံကာ နေရာအနှံ့အပြား
၌ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ပြောဆိုကြခြင်းကို မင်္ဂလကောလာဟလ ဟူ၍ခေါ်ဆိုကြသည်။
မောနေယျအကျင့် ပဋိပတ်နှင့်စပ်၍ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်ခြင်းကို မောနေယျကောလာဟလဟူ၍
ခေါ်ဆိုသည်။ လူ့ပြည်လောက၌ သဗ္ဗညူမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ထွန်းတော်မှုမည်ကို ကြိုတင်သိရှိကြကုန်သော
သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာကြီးသည် ကိုယ်၌ ဗြဟ္မာတို့၏ အဝတ်အစားအဆင်းတန်ဆာတို့ကို ဝတ်ဆင်ကြကုန်၍
ဦးခေါင်း၌ ဗြဟ္မာတို့၏ မကိုဋ်သရဖူကို ဆောင်ကြကုန်ပြီးလျှင် ကြည်လင်ရွင်လန်း ယမ်းမြောက်သော
စိတ်ရှိကြကုန်လျက် ဘုရားမပွင့်မီ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကပင် ကြိုတင်၍ လူတို့သွားလာရာ ခရိးလမ်းမတို့၌
အချင်းတို့…ယနေ့မှနောက် နှစ်ပေါင်းတထောင် စေ့ရောက်သောအခါ ရဟန်းတော်တစ်ပါး မြတ်စွာဘုရား
ထံ ချည်းကပ်၍ မောနေယျအကျင့် ပဋိပတ်ကို မေးလျှောက်လိမ့်မည် ဟူ၍ အနှံ့အပြား လူအပေါင်းတို့ကြားသိ
လောက်ောအင် ကြွေးကြော်ကြကုန်၏။ဤသို့ကြွေးကြော်ကြသည်ကို အကြောင်းအစပြု၍ မောနေယျအကျင့်
ပဋိပတ်ဟူသော စကားကို လူအများ စုရုံကာ နေရာအနှံ့အပြား၌ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ပြောဆိုကခြင်းကို
မောနေယျကောလာဟလ ဟူ၍ခေါ်ဆို၏။ ဤအကြောင်းတို့သည် ကောလာဟလ ငါးမျိုးတို့တည်း၊
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 8:340comments
ဒီကနေ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို ယဇ်ပူစော်ပေးတဲ့နေ့လို့ ဆိုပါတယ်၊
ဆရာလေးတို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင် အာဇာနည်နေ့လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ဒီနေ့
နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဘုံဝန်ဆာ(봉원사) ကျောင်းကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်၊အဲဒီမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေပါ
လာရောက်ကြည့်ရှု့နေတာတွေ့ရပါတယ်၊အဲဒီကျောင်းကို ရောက်သွားတော့ သတင်းစာအယ်တီတာတွေ
အင်တာဗြူးသမားတွေနဲ့ သွားစုံပြန်ပါတယ်၊မြန်မာဆိုတော့ လူတွေအားလုံးအရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်၊
မြန်မာပြည်မှာ တရားအားထုပ်သွားဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားသီလရှင် ဆရာလေးတွေနဲ့လည်း ဘာသာရေး
အမေးအဖြေလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ကိုရီးယားဘုန်းကြီးသီလရှင်များမှ အကတွေ အတီးတွေနဲ့ယဇ်ပူဇော်နေကြတာကို
တွေ့ရပါတယ်၊ ဒီလိုပွဲမျိုးတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတော့အရမ်းအံ့အားသင့်မိပါတယ်၊ တကယ့်ဆရာတော်တွေ တက္ကသိုလ်
ဓမ္မာစရိယ ဆရာလေးတွေအားလုံး ကကြတာတော့ကွေးနေတာပါဘဲ၊သူတို့ပြောပြတာတော့ သေတဲ့သူတွေကို
နတ်လမ်းဖောက်ပေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်၊ဘာသာရေးအနေနဲ့တော ထေရဝါနနှင့် မယာဟနကွာခြားချက်ကို ဘာမှအထွေအထူးပြောစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်၊ ဒီအကြောင်းလေးတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ဆရာလေးအနေနဲ့ကတော့ ဒီနေ့လေ့လာကြည့်ရှု့ခဲရတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုဖိုင်များသာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒကာတွေကမေးကြတယ်၊ ဘုန်းကြီးသီလရှင်တွေကတာ တကယ်လားတဲ့၊
လက်တွေ့မဟုတ်တော့ မယုံဘူးခင်ဗျာဆိုလို့ တကူးတကသွားရောက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျမ္မာချမ်းသာ
စွာ ထေရဝါဒ သာသနာတော်ကြီးအထွန့်ရှည်အောင် တည်ထောင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 4:260comments
ကသစ်အာလိန်- တာဝတိံ၌
ပါရမီတော်မျိုး - တူစုံဖြိုးလျက်
ဒုက္ကရစရိယ - ကျင့်ပြီးမှလျှင်
ကြွတော်မူပါ့ - အရှင်ဘုရား
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 9:460comments
ကောသလမင်း၏ အိပ်မက် (၁၆)ချက်
(၁) အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးခုသော နွားလား ဥသဘတို့သည် လာလတ်၍ မင်းရင်ပြင်၌ ဝှေ့မည်ဟု တွန်မြည် ကြုံးဝါးလျက် မဝှေ့ပဲသာလျှင် ဖဲလေကုန်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အရပ်လေးမျက်နှာမှ မိုးတို့သည် ရွာအံသကဲ့သို့ ထစ်ကြိုးလျက် မရွာပဲသာလျှင် ပျောက်ပျက် ကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ ကောက်ပဲသီးနှံတို့ ပျက်ဆီး၍ လူတို့၌ အစာရေစာ ရှားပါး ငတ်မွတ်ခြင်း ဖြစ်လတ္တံ့။
(၂) နုနယ်သေးငယ်စွာသော အပင်တို့သည် ပွင့်ကြ သီးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
(၄) လှည်းတို့၌ ဝန်ကို ဆောင်နိုင်သော နွားကြီးတို့ကို မကမူ၍ နွားငယ်တို့ကိုသာ ကစေကုန်၏။ နွားငယ်တို့လည်း ဝန်ကို မနိုင်၍ လှည်းတို့ကိုလည်း ဆွဲခြင်းငှာ မတတ်နိုင်သည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အသက်ကြီး ဝါကြီး ပညာရှိကုန်သော သူတို့အား အမတ်၊ တရားသူကြီး စသော ရာထူးစည်းစိမ်တို့၌ မခန့်ထားမူ၍ အသက်၊ ဝါ၊ ပညာ ငယ်ကုန်သော လူငယ်တို့အားသာ ခန့်ထားကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အခွင့်အရေးမသိ၊ မတော် မမှန်ဖြစ်၍ အမှု မပြီး၊ အကျိုးမပြီး ရှိသောအခါ လူငယ်တို့သည် မိမိတို့၏ ရာထူး စည်းစိမ်ကို စွန့်ကြလတ္တံ့။ လူကြီးတို့သည်လည်း ငါတို့မှာ ပြင်ပကသာ ဖြစ်၏ဟု လျစ်လျှုပြု၍ နေကြလကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ တရားမစောင့် အမှုမပြီးကြသည်နှင့် မင်းနှင့်တကွ တိုင်းပြည်ပါ ဆုတ်ယုတ် ပျက်ဆီးကြလတ္တံ့။
(၅) ခံတွင်း နှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို ခံတွင်းနှစ်ခုဖြင့်ပင် စားသည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့လက်ထက်၌ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့သည် နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ကြကုန်လတ္တံ့။
(၆) အဖိုးတသိန်း ထိုက်သော ရွှေခွက်ကို မြေခွေးဖိုအား ကျင်ငယ်စွန့်ရန် ပေး၏။ မြေခွေးလည်း ထိုရွှေခွက်၌ ကျင်ငယ်စွန့်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးမြတ်သော သူတို့သည် အချီးအမြှောက် မခံရ၊ ဆင်းရဲကြ၍ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးတရ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်တို့ အသက် မွေးခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကုန်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့ သမီးတို့ကို အမျိုးယုတ်တို့အား ပေး၍ အသက်မွေး ကြကုန်လတ္တံ့။
(၇) တယောက်သော ယောင်္ကျားသည် အင်းပျဉ်၌ ထိုင်လျက် လွန်ကို ကျစ်၍ ခြေရင်း၌ ထား၏။ ထို အင်းပျဉ်အောက်၌ရှိသော ဆာလောင်သော မြေခွေးမသည် ထိုယောင်္ကျား မသိစဉ်လျှင် ထိုလွန်ကို စား၏ ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မိန်းမတို့သည် အစားအသောက်၊ အဝတ်၊ အနေအထိုင် စသည်တို့၌ လော်လည်ခြင်း ရှိ၍ မိမိတို့ လင်ယောင်္ကျားသည် ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ရှာဖွေ စုဆောင်းအပ်သော ဥစ္စာ ပစ္စည်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အစားအသောက် တို့၌ လည်းကောင်း၊ သောက်စား ကစားခြင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အပျော်အပါးတို့၌ လည်းကောင်း၊ သဘောက် လင်ငယ်ထားခြင်း တို့၌ လည်းကောင်း အရမ်းမဲ့လျှင် ဖြုန်းတီးလေလတ္တံ့။ ခွေးမသည် မသိ စဉ်းစား သကဲ့သို့ အိမ်သူ မိန်းမတို့သည် ဤသို့ တိတ်တဆိတ် ဖြုန်းတီး ခိုးစားကြလတ္တံ့။
(၈) ရေမရှိသော အိုးတို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရေပြည့်အိုးကြီး တလုံးကို မြင်ရ၏။ လူတို့သည် အရပ် ၈ မျက်နှာမှ ရေကို ယူလာကြ၍ ထိုရေပြည့်အိုးကြီး အတွင်းသို့သာလျှင် လောင်းထည့် ကြ၏။ လောင်းထည့်သော ရေတို့သည် ပြည့်လျှံ၍ ကျကုန်၏။ ဤသို့လျှင် အဖန် တလဲလဲ ရေပြည့်အိုးသို့သာ လောင်းလျှက် ရေမရှိသော အခြံအရံ အိုးတို့ အတွင်းသို့ကား မည်သူမျှ မလောင်း မထည့်ပဲ နေသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
(၉) နက်ရှိုင်း ကျယ်ဝန်းသော ရေကန်ကြီး တခုတွင် သတ္တဝါတို့ ဆင်း၍ ရေသောက်ကြ၏။ ကန်၏ အလယ် ရေနက်ရာ၌ ရေသည် နောက်၍ ကန်နားဝန်းကျင် ရေတိမ်ရာ သတ္တဝါတို့ နင်းရာ၌ ရေသည် ကြည်လင်၏ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့သည် မတရား အုပ်စိုးခြင်း၊ တံစိုးစားခြင်း၊ လော်လည်ခြင်း၊ သနားညှာတာ ဂရုဏာ မဲ့ခြင်း၊ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်ခြင်းတို့ ရှိလျှက် လူတို့အပေါ်၌ အထူးထူး အပြားပြားသော အချင်းအရာဖြင့် အခွန်အတုတ်တို့ကို ခွဲခန့် ကောက်ယူလတ္တံ့။ ထိုအခါ လူတို့မှာ တစ်စုံတစ်ရာ မပေးဆောင်နိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲလျက် မြို့ကြီးရပ်ကြီးတို့၌ မနေနိုင်ပဲ ရပ်စွန် ပြည်နားသို့ သွားရောက်နေကြရသည် ဖြစ်လတ္တံ့။ ကန်အလယ်တွင်နောက်၍ ကန်ဘေးတွင် ကြည်သကဲ့သို့ မြို့လယ်ရွာလယ်၌ တိတ်ဆိတ်၍ ရပ်စွန်ပြည်နား၌ လူစည်ကားလတ္တံ့။
(၁၀) တစ်လုံးတည်းသော အိုးဖြင့် တချိန်တည်းချက်သော ထမင်းသည် အချို့ပျော့၏၊ အချို့ မနပ်၊ အချို့နပ်၏။ ဤသို့ မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မိုးကွက်ကြား ရွာလတ္တံ့။ ထိုအခါ အချို့နေရာ၌ မိုးရွာလွန်း၍ ကောက်ပဲသီးနှံ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ၌ မရွာ၍ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ တွင်ကား မိုးမှန်၍ ကောင်းအံ။ ဤသို့လျှင် ထမင်းအိုးတွင် မြင်သော ထမင်းကဲ့သို့ ကောက်ပဲသီးနှံ သုံးထွေ ပြားလတ္တံ့။
(၁၁) အဖိုးတသိန်းထက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစားသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
(၁၂) ဘူးတောင်းတို့သည် ရေ၌ နစ်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
(၁၃) ကျောက်ဖျာကြီး ရေတွင်ပေါ်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
(၁၄) ဖားငယ်မ တို့သည် ကြီးစွာသော မြွေဟောက်ကြီးများကို စားမြိုသည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
(၁၅) မည်းနက် ရုပ်သွင်၊ အဆင်း ဆိုးဝါးသော ကျီးတို့ကို ရွှေ၏ အဆင်းနှင့် တူသော ရွှေဟင်္သာ တို့က ခြံရံ နေကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အားနည်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ ထိုမင်းတို့သည် ဆင်စီး မြင်းစီး စသော အတတ်တို့၌ မလိမ္မာ၍ စစ်ထိုးခြင်း၌ မရဲရင့်ဘဲ ဖြစ်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ တိုင်းပြည် နိုင်ငံ ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုး၍ တူသော ဇာတ်ရှိသော သူကောင်းသား တို့အား အစိုးရခြင်းကို မပေးမူ၍ မိမိတို့ထံ၌ ခစား ကြကုန်သော အမျိုး ယုတ်သော ကျေးကျွန်တို့အားသာ ပေးကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးကောင်းသားတို့ ကိုးကွယ်ရာ မရှိပဲ အစိုးရခြင်း၌ တည်ကုန်သော အမျိုးယုတ်တို့ထံ၌ ခစားကြကုန် လတ္တံ့။
(၁၆) ဆိတ်တို့သည် သစ်ကို သတ်စားကြသဖြင့် သစ်တို့သည် ကြောက်လန့်လျက် ဆိတ်တို့ကို အဝေးမှ မြင်လျှင်ပင် တောချုံရှိရာသို့ ပြေးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးရ ကုန်သည် ဖြစ်၍ အမျိုးမြတ်သူတို့ မထင်ရှား ဖြစ်လတ္တံ့။ အမျိုးယုတ် သူတို့မှာ မင်းကျွမ်းဝင်သည် ဖြစ်၍ တရားရုံးတို့၌ သြဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးလျက် အမျိုးမြတ်သူတို့၏ ဘိုးဘပိုင် လယ်မြေ ဥစ္စာ အရပ်ရပ်တို့ကို ငါတို့ လယ်မြေဥစ္စာ ဖြစ်သည်ဟု သိမ်းယူကြ၍ တရားတဘောင် ဖြစ်လျှင် တန်ခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနှိပ်ပုတ်ခတ် ခြိမ်းခြောက် နှင်ထုတ်လျက် အနိုင်ကျင့် ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်သူတို့ ကြောက်လန့် စက်ဆုတ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ လယ်ယာ ဥစ္စာတို့ကို ပေးအပ်ကုန်လျက် အိမ်သို့ပြန်၍ အိပ်နေကြကုန်အံ။ ထိုမှ တပါးလည်း အကျင့်သီလရှိသော ရဟန်းတို့သည် အကျင့်သီလမဲ့သော ရဟန်းတို့က ချုပ်ချယ် ဖိနှိပ်ကြလေသဖြင့် တောသို့ ပြေးဝင် ပုန်းအောင်း ကြကုန်လတ္တံ့။ ဤသို့လျှင် အမျိုးကောင်း၊ သူတော်ကောင်း တို့လည်း လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ တောတောတောင်တောင် တို့ကို ပြေးပုန်း ကြကုန်လတ္တံ့။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 6:000comments
2009년 4월 11일 토요일
ဥတ္တရကုရုခေါ်သော မြောက်ကျွှန်း၌နေထိုင်ကြသည့် လူတိုပသည် အမြဲ နိစ္စ
ငါးပါးသီလကို လုံခြုံကြသည်။ ယင်း ငါးပါးသီလလုံခြုံသူတို့၏ ဓမ္မတာသိဒ္ဓိကြောင့် အောက်ပါဝိသေသန
၂၊ မြောက်ကျွှန်းနေလူတို့မှာ ရှည်ခြင်းပုခြင်းစသော အပြစ်မျိုးကင်းသည်၊လုံးရပ်သဏ္ဍာန်နှင့်ပြည့်စုံ၍
၃။ ဇရာရောဂါ အနှိပ်အစက်မခံရ၍ ဆံပင်ဖြူခြင်းသွားကျိုးခြင်း အရေတွန့်ခြင်း အင်အားကုန်ခမ်းခြင်းမရှိပေ။
၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် အဟာရပရိယေသန ဒုက္ခကင်းသည်။
၅။ မှက်၊ခြင်၊ယင်၊ကြမ်းပိုးစသော သတ္တဝါကိုက်ခဲမှုမခံရ။
၆။ စားသောက်မှုအတွက် ဝယ်ရ၊သွားရ၊ချက်ရသော ဒုက္ခမျိုးကင်းသည်၊ အခွံမပါ ဖွဲကင်းသောသလေးဆန်ကို
အာဟာရအဖြစ်သုံးဆောင်ရသည်၊ ပကတိထင်းမီးဖြင့် ချက်မနေရ၊ ဇောတိကမည်သော
သီးခြားစီမံနေစရာမလို၊စားလိုသု၏ူက အချဉ်တမ်းတလျှင်အချဉ် အချိုတမ်းတလျှင်အချို အရသာပေါ်လာ၏။
၇။ အထက်ဖော်ပြပါ အဟာရကိုမှီဝဲသောကြောင့်
၈။ မြောက်ကျွှန်းနေလူအချင်းချင်း မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကင်းရှင်းကြသည်။
၉။ ရာသီဥတုမျှတသည်။အပူလွန်ကဲမှု၊ အအေးလွန်ကဲမှု ရာသီဒဏ်မခံရ။
၁၀။ မြောက်ကျွှန်း၌ တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့ ဆွမ်းခံကြွမြဲ ဓမ္မတာဖြစ်၍ထူးခြားသည်။
၁၁။ မြောက်ကျွှန်း၌ ကုန်းသူ၊ကွသူ၊ ကောက်သူ၊ကွေးသူ၊ခွင်သူ၊
၁၂။ အမျိုးသမီးများ ၆ပြစ်ကင်း၍ အရုပ်ဆိုးသူမရှိ၊၁၆နှစ်အရွယ်ထင်မှတ်ရသည်၊အမျိုးသားများ ၂၅
၁၃။ သားသမီးငယ်များက မိဘတို့ကိုနားပုနားဆာမလုပ်ကြ၊တွယ်ကပ်၍မနေကြ။
၁၄။ မြောက်ကျွှန်းနေလူတို့ ကာမကိစ္စ တစ်သက်လုံးမှာ (၇)ရက်သာခံစားကြသည်။
၁၅။ ကိုယ်ဝန်တည်ရခြင်းဒုက္ခ၊ လွယ်ရခြင်းဒုက္ခ၊ ဖွားရခြင်းဒုက္ခတို့မှလည်း ကင်းသည်။
၁၆။ မိဘတို့ကရင်သွေးငယ်အတွက် ကြောင့်ကြစိုက်နေစရာမလို၊ ကလေးများဆော့ကစားရာ
အိပ်ပျှော်ရာမှာထား၍ လိုရာသွားနိုင်သည်။ တွေ့သူက အစားကျွှေးနို့တိုက်သည်။ ကလေးများကံကြောင့်
၁၇။ အဝတ်အတွက်ပူစရာမလို၊ ပဒေသာပင်မှရသည်။
၁၈။ ရေချိုးသည့်အခါ စုပေါင်းရေချိုးကြသည်၊အဝတ်ကိုစုပုံထားသည်၊ပထမရေချိုးပြီးသူက
အပေါ်ဆုံးမှအဝတ်ကို ယူဝတ်သည်။ငါ့ဟာ သူ့ဟာ ငြင်းခုံမှုမရှိ။
၁၉။ သေသူအတွက် ကျန်ရစ်သူများ ပူဆွေးသောကမဖြစ်၊ မငိုကျွှေးပေ။
၂၀။ အပုပ်နံ့မရှိ၊ သုသာန်သင်္ချိုင်း ထားစရာမလို၊သေသူ၏ရုပ်ကလာပ်ကို အဝတ်ဖြင့်ထုပ်ပတ်၍ ချထားရသည်၊
ကုသိုလ်ကံ အဟုန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ငှက်ကြီးများက တခြားကျွှန်ူသို့ ယူဆောင်သွားကြသည်။
၂၁။သေပြီးနောက် နတ်ပြည်ရောက်သည်၊ ငရဲ၊တိရစ္ဆာန်၊ပြိတ္တာမဖြစ်ချေ။
၂၂။ အနှစ်တစ်ထောင် သက်တမ်းမြဲသည်။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 5:240comments
ရေအိုင်ပမာ ပုဂ္ဂိုလ် (၄) မျိုး
အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟန်းတို့အား ရေအိုင် ၄-မျိုးကို ဥပမာပြု၍
ရဟန်းအပေါင်းတို့၊ ဤလောကတွင် ရေအိုင်၎-မျိုးရှိသည်။
(၄) နက်လျှက်နက်ရောင်ရှိသောရေအိုင် တို့ဖြစ်သည်။
(၁) ရှေ့သို့သွားခြင်း၊ နောက်သို့ဆုတ်ခြင်း ၊ရှေ့သို့ကြည့်ခြင်း စသော အမှုအရာအားဖြင့်
ကြည်ညိုဖွယ်ရှိသော်လည်း သစ္စာလေးပါးတရားကို မသိသူသည် တိမ်လျှက်နက်ရောင်ရှိသော
(၂) ဆိုခဲ့သော အမှုအရာတို့အားဖြင့် ကြည်ညိုဖွယ်မရှိသော်လည်း သစ္စာလေးပါးတရားကို
သိမြင်သူသည် နက်လျှက်တိမ်ရာင်ရှိသော ရေအိုင်နှင့်တူသူဖြစ်သည်။
(၃) ဆိုခဲ့သော အမှုအရာအားဖြင့် ကြည်ညိုဖွယ်မရှိ၊ သစ္စာလေးပါးတရားကိုလည်း မသိမြင်သူသည်
(၄) ဆိုခဲ့သောအမှုအရာအားဖြင့် ကြည်ညိုဖွယ်ရှိ၏၊ သစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိမြင်သူသည်
နက်လျှက်နက်ရောင်ရှိသော ရေအိုင်နှင့်တူသူဖြစ်သည်ဟု ဟောတော်မှုခဲ့သည်။
ကျမ်းကိုး။ ။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ ဝလာဟကဝဂ်မှ
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 5:100comments
ိုသာသနာ ဆိုတာက ပါဠိစကားလုံးတစ်ခုပါ၊ မြန်မာလိုပြောပြရရင် အဆုံးအမပေါ့၊ အဲဒီအဆုံးအမဆိုတာ ဘယ်ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘာသာရဲ့တရားတော်ကိုဖြစ်ဖြစ် သာသနာ လို့ခေါ်ပါတယ်၊ မှတ်ရမှာက သာသနာ - ဆိုတာ အဆုံးအမတရားတော်။ ဆရာလေးတို့ကတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွင်းက ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမတော်တွင်းက သာသနာ့ဝန်ထမ်းပါ၊ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့ သာသနာတော်ရဲ့ဝန်ကို ထမ်းရွက်ထားကြတဲ့ သူတွေကို သာသနာ့ဝန်ထမ်းလို့ဆိုပါတယ်၊ အဲဒီဆရာလေးတို့ ထမ်းထားကြရတဲ့ ၀န်ဆိုတာကလည်း နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်၊ တစ်ခုက ဂန္ထဓူရပါ၊ မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ အဆုံးအမသာသနာတော်လို့ခေါ်တဲ့ ဓမ္မတွေကို ဖတ် မှတ် ကျက် လေ့လာ၊ စာသင် စာဖတ်၊ စာကျက် စာအံဆိုပါတော့၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စာသင်စာကျက်ရတဲ့ ကျောင်းသားအဖြစ်ရယ်၊ ကိုယ်က သူများတွေကို ပြန်သင်ပေးရတဲ့ဆရာဖြစ်ရယ် အဲဒါကို ဂန္ထဓူရလို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက် ၀န်တစ်ခုကတော့ ၀ိပဿနာဓူရပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဘို့ ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားပြသ ဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့ သာသနာတွေထဲက နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်ကြံ ကြိုးကုတ် အားထုတ်ရတဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ...
အဲဒီအလုပ်နှစ်ခုသည်ပင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွင်းက သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်တာဝန်ပါ။ ဒီဓူရနှစ်ဖြာကိုထမ်းဆောင်တဲ့သူမှန်မှသာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ဘို့ရာအတွက်မှာ ဆရာလေးတို့လို သီလရှင်တွေချည်းသက်သက်ဖြင့်တော့ အောင်မြင်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါဘူး၊
အကြောင်းကတော့ ဆရာလေးတို့ဟာ ကိုယ် စိတ် နှလုံးသုံးပါးကို အပြည့်အ၀ပေးနိုင်ပေမယ့်၊ အဲဒီလို လုပ်နိုင်ဘို့ရာ စား ၀တ် နေရေးအတွက် ပစ္စည်းလေးပါးလို့ခေါ်တဲ့ သင်္ကန်း ဆွမ်း ကျောင်း ဆေးဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ လခစား စီးပွားရှာသူတွေ မဟုတ်လေတော့ အဲဒီ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကို ထောက်ပံ့ပေးလှူကြမယ့် ‘ဒကာ/ဒကာမတွေဆိုတာ လိုလာပါတယ်။ ပြောရရင် ဆရာနဲ့ဒကာပဲဆိုပါတော့။ ဆရာ/ဒကာ လက်တွဲညီညာမှသာလျှင် သာသနာဆိုတာ တည်တန့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ တွေးကြမယ်ပေါ့၊ ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းဟာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဘာဆိုင်လည်းပေါ့။ တကယ်တော့ ဆိုင်ပါတယ်၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်က သာသနာပြုဘို့ ညွှန်ကြားတဲ့နေရာမှာ မိမိကိုယ်တိုင်ချမ်းသာဘို့ (အတ္တဟိတ) မိမိဆွေမျိုးမိဿင်္ဂဟတွေ ချမ်းသာစေဘို့ လောကကြီးချမ်းသာစေဘို့ (လူရော နတ်ပါချမ်းသာစေဘို့) (ပရဟိတ) အဲဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ သာသနာပြုကြဘို့မိန့်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာလေးတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေထဲက ပညာမသင်နိုင်ကြတဲ့ ကလေးသူငယ်လေးတွေကို စာပေတတ်မြောက်စေလိုတယ်၊ ပညာတတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အနာဂတ် ကြယ်စင်လေးတွေ ဖြစ်စေလိုတယ်၊ လမင်းကြီးမဟုတ်ရင်တောင်၊ လမင်းကြီးလောက် အလင်းရောင် မပေးဝေနိုင်လျှင်တောင် အဲဒီလမင်းကြီးဘေးနားက ကြယ်စင်လေးတွေလို သူတို့ကိုယ်ပိုင် စွမ်းအားတွေနဲ့ စုပေါင်းညီညာစွာဖြင့် ပြည်နိုင်ငံကို အကျိုးပြုအလင်းလေးတွေနဲ့ တောက်ပစေချင်ပါတယ်။
ဥယာဉ်မှူးတစ်ယောက် ပန်းကလေးတွေ ပွင့်လာစေအောင် ပန်းပင်လေးတွကိုပျိုးကြသလို၊ အဲဒီပန်းကလေးတွေ ပွင့်လာစေအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသလို ကူညီပြီး လုပ်ဆောင်ချင်တယ်၊ ကြိုးစားချင်တယ်၊ အားထုတ်ချင်တယ်၊ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ခု ဒီပန်းခင်းကို ပြုစုနေပါတယ်၊ ပန်းလိုချင်ရင် အပင်ပျိုးတတ်မှဆိုသလို ပန်းကိုလိုချင်သော ဆရာလေးတို့ ခု ဒီသုခကာမီဆိုတဲ့ ပျုိုးခင်းလေးကို ပျိုးတတ်အောင် ပန်းလှလှလေးတွေပွင့်လာအောင် အားထုတ်နေပါတယ်၊ အပင်ပျိုးတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တာလေးတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကို အကြံပေးဘို့ ထောက်ပြပေးဘို့ တစ်စုံတစ်ရာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ပေးစေဘို့ ညွှန်ပြပေးဘို့ ဆရာလေးတို့က ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာလေးတို့ရဲ့ ပန်းခင်းလေးဆီကိုလည်း အလည်အပတ် လာရောက်စေချင်ပါတယ်၊ လာခဲ့ကြပါဦးလို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်... အရောက်လာမည့်သူများကို ကြိုဆိုလျက်
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 4:570comments
*ကိုယ်ကျိုးမပါ ၊ သူ့တွက်သာငဲ့ကာဆောင်ရွက်ရ။*ကရုဏာထား ၊ မေတ္တာပွားစွမ်းအားဖြည့်ပေးရ။*သူ့ကိုစောင့်ရှောက်၊ ကိုယ့်ဂုဏ်မြောက်ထွန်းတောက်စွမ်းအားရ ပရဟိတဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ဘဲ သူ့အတွက် သက်သက်လုပ်ပေးတာပါ၊ သီးခြားအလှူဒါန ကြီးတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာ သူ့အတွက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဦးတည်ပြီး လုပ်ကြတာပါ၊ကိုယ့်ရဲ့မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရရေးကို အဓိကဦးတည်တာပါ၊ ဒါကြောင့်သီလရှိတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး လှူကြတယ်၊ ကိုယ့်အတွက်ငဲ့ပြီး ရွေးချယ်တာပါ။ပရဟိတဆိုတာ သူ့ဆီက ဘာတစ်ခုမှမျှော်လင့်ချက်မထားဘူး၊ ငါတို့က ဒီလို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးလိုက်ရင် သူတို့ကငါတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မယ် ၊ပေးကြလိမ့်မယ် ငါတို့လိုအပ်တဲ့အခါသူတို့က ပြန်ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးကြလိမ့်မယ် လို့လုံးဝ မျှော်လင့်ချက်မထားပါဘူး၊ ပရဟိတသဘောဆိုတာ ကိုယ့်ကြောင့် သူချမ်းသာလာရင်တော်ပြီပေါ့ကိုယ့်အတွက်မငဲ့မှ မြင့်မြတ်တဲ့ပရဟိတစိတ်ဖြစ်မှာပါ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည့်ကြပါ၊ ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမငဲ့ဘူး။ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကြီးကို လိုချင်တာက လောကကြီးမှာကြွားချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဥာဏ်ကြီးကျယ်မှ အကြီးကျယ်ဆုံး ပရဟိတလုပ်ငန်းကို လုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ လိုချင်တာပါ၊ များများသိမှ များများပေးနိုင်ပေးနိုင်မယ်၊ ကြီးကြီးသိမှ ကြီးကြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်၊ ကောင်းကောင်းသိမှလည်း ကောင်းကောင်းဖန်တီးပေးနိုင်မယ်၊ ဒါကြောင့် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်ပေးချင်းလို့ ကြီးကျယ်တဲ့ဥာဏ်ကို ရဖို့အတွက် အကြီးကျယ်ဆုံး ပါရမီလုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့တာပါ။ ပရဟိတဆိုတာမျိုးဟာပေးဖို့ သက်သက်ပါ၊ လှူတဲ့အခါသီလရှိတဲ့သူတွေ ရွေးချယ်ကြတာက ကိုယ့်အတွက်ငဲ့လို့ပါ၊ ပရဟိတကျတော့ အယုတ် အလတ် အမြတ်မရွေး ဘယ်သူ ဘယ်ဝှာ မရွေး အားလုံးရဲ့ အကျိုးအတွက်ပါ၊ သူတို့ဆီက ဘာတစ်ခုမှလဲ မျှော်လင့်ချက် မထားပါဘူး၊ ကိုယ့်ကြောင့် သူချမ်းသာသွားရင်ပြီးတာပါဘဲ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 2:270comments
ပန်းပွင့်တယ်ဆိုတာကတော့ သဘာဝပါဘဲလေ၊ ဒါပေမဲ့ပွင့်လာတဲ့ ပန်းကလေးတွေ၊ ပျိုးထားတဲ့ ပန်းကလေးတွေ ဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ရနံ့သင်းတဲ့ပန်းကလေးတွေ ပွင့်လာစေဖို့ကတော့ ဥယာဉ်မှူးရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်းတတ်မှူ့ ဂရုစိုက်မှူ့အပေါ်မှာတည်မှီနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာလေးအနေနဲ့ ဆရာလေးတို့ပြုစုတည်ထောင်ထားတဲ့ "သုခကာမီ"ဆိုတဲ့ ဥယာဉ်လေးထဲမှာ ပန်းကလေးတွေက ဘေးကင်း၊ရန်ကင်းနဲ့ရှင်သန်စေချင်ပါတယ်၊ ရနံ့သင်းတဲ့ ပန်းကလေးတွေ ဖြစ်အောင်လည်း ဆရာလေးတို့ကျိုးစားရမယ်၊ အဲဒီပန်းကလေးတွေဖူးပွင့်လာတဲ့အခါရနံ့သင်းမယ်၊ အလှဂုဏ်တွေနဲ့ကြွယ်ဝနေမယ်ဆိုရင်ဆရာလေး ဒီဥယာဉ်လေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ရကျိုးနပ်ပါပြီ၊ ဆရာလေးတို့ ရဲ့ ပရဟိတ(ဥယာဉ်မှူး)ဆိုတာ မျိုးက ပန်းကလေးတွေ ထံမဘာတစ်ခုမှမျှော်လင့်ထားတာမရှိပါဘူး၊ ဆရာလေးတို့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုက်တာ ပန်းကလေးတွေ ဘဝရှေ့ရေးကောင်းသွားဖို့ တခုတည်းအတွက်ပါဘဲ၊ တကယ်တော့ ပရဟိတဆိုတာလောဘကို တိုက်ရိုက်ဖြိုဖျက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊ စေတနာတွေထားပြီးလုပ်ရတာပါ၊ ဆရာလေးကတော့ ရှားပါးလှတဲ့ လူ့လောကကြီးမှာ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ မိဘများကို ရင်နှင့်အမျှ ကရုဏာဖြစ်မိပါတယ်၊စီးပွားရေးက အဆင်မပြေ သားသ္မီးလေးတွေ ပညာတတ်အောင် ကျောင်းထားပေးချင် ထားစရာငွေကမရှိ ဘယ်လောက်များ စိတ်သောက ရောက်လိုက်လေမလဲလို့ စာဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့သူများစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အဲဒီထဲမှာဖူးချင်ပွင့်ချင်တဲ့ ပန်းကလေးများဧကန်ရှိပါတယ်၊ ဒီပန်းကလေးတွေဖူးနိုင်ပွင့်နိုင်ဖို့အတွက် ဆရာလေးတို့ ဆရာတပည့်တိုင်ပင်ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ၊ ဆရာလေးက အခုလောလောဆယ်နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရှိနေတော့ ငွေအင်အားမှလွဲပြီး မကူညီနိုင်သေးပါဘူး၊ ဆရာကြီး၊ ဆရာလေးများရဲ့ ဥာဏ်အင်အား၊ ခွန်အားတွေနဲ့လုပ်ဆောင်ပေးနေကြပါတယ်၊ ဆရာကြီးနှင့်တကွ ဆရာလေးများအားလုံးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ၊ ပရ(ဥယာဉ်မှူး) ဟာ တချိန်ကဆရာလေးရဲ့ အိပ်မက်ကလေးပါ၊ ဆရာလေးလည်း ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသူမို့ ဆရာလေးရဲ့ ပန်းကလေးတွေကို ပန်းကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင် ဘဝရပ်တည်မှုလေးတွေရသွားအောင် ဆရာလေးရဲ့အသက်နဲ့ ခန္ဓ္ဓာရှိနေသမျှဘယ်လို အခက်အခဲဘဲတွေ့တွေ့ရင်ဆိုင်မယ်၊ ကျိုးစားမယ်ဆရာလေးသန့်စင်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက် ဆရာလေးရဲ့ ပန်းကလေးတွေ အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကဆရာလေးကို ပြစ်မထားဘူးဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်၊ ကိုယ့်စေတနာဟာကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ခဘဲမဟုတ်လား၊ ဆရာလေးကတော့ စဉ်းစားတိုင်း ပီတိဖြစ်မိတာ အမှန်ပါ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 2:23 1 comments
နောက်လည်းထပ်ကာထပ်ကာ တွေ့နေရဦးမှာဘဲလို့ ယုံကြည်နေမိပါတယ်၊ တကယ်တန်းဆိုရင်တော့
ပန်းလေးတွေရဲ့ ဘဝဟာ ဥယာဉ်မှူးရဲ့ အပေါ်မှာ တည်မှီနေရတယ် ဆိုတာကိုလည်း
ဆရာလေးကသိထာဲးပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဥယာဉ်မှူးမဲ့တဲ့ ပန်းကလေးတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါတိုင်း ဆရာလေး
တွေးမိတာက ဒီပန်းကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်းပေးနိုင်ခဲ့ရင်၊ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒိပန်းကလေးတွေ
ဒီထက်ပိုလှလာလိမ့်မယ်၊ လန်းစန်းဝင့်ကြွားလာကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်
ဆရာလေးဒီ သုခကာမီ အမျိုးသ္မီးသင် ပညာရေးကျောင်းဆိုတဲ့ ဥယာဉ်ငယ်လေးကိုဆရာလေးရဲ့ ဥပဇ္ဈယ်
ဆရာကြီး ဒေါ်အဂ္ဂဥာဏီ နှင့်လက်တွဲပြီး (၇.၆.၂၀၀)မှာစတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းနဘေးမှာ
ပွင့်နေတဲ့ ပွင့်နိုင်စွမ်းရှိလျှက် မပွင့်လိုက်ရဘဲဘဝ သေသွားရတဲ့ ပန်းကလေးတွေအတွက် ဒီဥယာဉ်ငယ်လေးကို
အခု တည်ထောင်လိုက်ပါပြီ၊ ဆရာလေး စိုက်ပျိုးပါတော့မယ်၊ ပန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝလေးအစဉ်
လှပစေဖို့တတ်နိုင်သမျှသောအင်းအားတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပါတော့မယ်။ ဒီပန်းကလေးတွေကို ဆရာလေးနဲ့အတူ
လက်တွဲပြီး ပြုစုပျိုးထောင် ပေးကြလိုသော ပန်းချစ်သူ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်း လာရောက်လက်တွဲ
ပျိုးထောင်ပေးကြစေဖို့ဆရာလေးလက်ကမ်းပါရစေ၊ဆရာလေး နဲ့အတူ ပန်းကလေးများကို
ဖူးပွင့်လန်းစန်းစေကြရအောင်ပါလို့ ဆန္ဒပြု လိုက်ပါရစေ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 2:200comments
ပြာလဲ့လဲ့ မိုးကောင်းကင် တစောင်းတင်နေတဲ့ အနီရောင် နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး အိုင်တီ ခေတ်ကြီးထဲမှာ
ငယ်စဉ်အခါ ကျောင်းမနေရတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်လှန်စဉ်စားမိခဲ့၊။ စိမ်းဖြူရောင် ၀တ်စုံလေးတွေနဲ့
ကျောင်းသွားနေတဲ့ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဘယ်သူမှ မသိအောင်းမျက်ရည်ဝဲခဲ့။
တက်ချင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်း၊သင်ချင်ခဲ့တဲ့စာ ငါနဲ့ မဆိုင်သလိုရှိခဲ့၊ ကံ ကြမ္မာဆိုတာ
ငါမစဉ်းစားမိခဲ့၊လေးခွနဲလောက်စာ အပေါက်ပါတဲ့ ညစ်ထေထေ လွယ်အိတ်တစ်လုံးကိုလွယ်ပြီး နေ့စဉ်ဝ
မ်းစာအတွက် ငါရုန်းကန်ခဲ့ရ။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ခြေနှစ်ချောင်း မကယ်ကောင်း ဆိုတဲ့ စကားသံတွေ ခါးသီးစွာ
ကြားခဲ့ရ၊ ဒီလိုနဲ့ စခဲတဲ့ ငါဘ၀ သုညကမ္ဘာက ရုန်းမထွက်နိုင်ခဲ့။ ခေတ်တွေပြောင်း စနစ်တွေပြောင်း အသစ်တွေ
အဟောင်း အဟောင်းတွေ အသစ်ဖြစ်ခဲ့။ ငါမွေးခဲ့တဲ့ ငါမြေမှာ ဗက ဆိုတာ ပေါ်ခဲ့။အခမဲ့ ပညာရေး အစာလည်း
ကြွေး နေစရာ ပေးသတဲ့၊ ဒီအချိန်မှ စာသင်ရင် သူများအမြင် ငါ အရူးဖြစ်မတဲ့၊ ငါ ငယ်ငယ်က ဆိုရင် ဆိုတဲ့
အတွေးကြောင့် ငယ်စဉ်က မျက်ရည်များ ဆက်လက်စီးဆင်းသွားခဲ့၊။ကိုယ့်အရေး ကိုယ်မတွေး ပညာရေးကို
ဦးစားပေး၊ စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေးနဲ့ ဘာသာ သာသနာအတွက် အားတက်စွာ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ဗက
ပညာရေး၊အလေးပေးဆောင်ရွက်နေသူ အားလုံးကို အနာဂတ် ကမ္ဘာ၊သာသနာအတွက် လမ်းပြကြယ်များဟုပင်
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 2:070comments
2009년 2월 23일 월요일
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာ စိတ်တခုကိုနိုင်အောင်ထိန်းဖို့ ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာကိုတော့ အားလုံးသိပြီးသာဖြစ်မှာပါ၊ စိတ်ကလေး ထားတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာလည်း တော်တော်ကို မလွယ်လှပါဘူး၊
လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ စိတ်ကဘဲဦးဆောင်ပါတယ်၊ အိပ်ချင်တာလဲဒီစိတ်၊ စားချင်တာလည်းဒီစိတ်၊ သွားချင်တာ ကုန်ကုန်ပြောရရင်တော့ ချင်တာမှန်သ၍ စိတ်ကြောင့်ချည်းပါဘဲ၊ ပုထုဇဉ်တိုင်း
ဟာ ကိလေသာ (၁၀)ပါး ရှိနေတုန်းပါ၊ ကိလေသာ(၁၀)ပါးဆိုတာက( လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဌိ၊ ဝိစ္ဆိကိစ္စာ၊ ထိန၊ မိဒ္ဓ၊ ဥဒ္ဓစ္စ၊ အနောတ္တပ္ပ) ကိုခေါ်ပါတယ်၊ တနေ့တနေ့စဉ်းစားကြည့်ကြပါ၊
ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ်ဘယ်ဟာက ပိုများလဲလို့၊ မနက်မိုးလင်းအိပ်ရာထတဲ့အချိန်ကစလို့ ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်ထိ ငါဒီနေ့ ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ အကုသိုလ်စိတ် ဘယ်ဟာက ပိုများလဲ သုံးသပ်ကြည့်ရင်
သိနိုင်ပါတယ်၊ ဆရာလေးလဲ နေ့စဉ့်ဒီလိုဘဲ သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်၊ အကျင့်ရသွားတဲ့အခါ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်၊ အားလုံးသောစာဖတ်ပရိတ်သတ်များကိုလည်းတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်၊
လောကမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာနေတတ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကား ကြားဖူးပါတယ်၊ ခဏလာတဲ့ လူ့ဘဝလေးမှာ ကျင်လည်နေခိုက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အလုပ်၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်
အားလုံးကို ဆင်ခြင်နေထိုင်ရမှာက သူများမဟုတ်ဘူး မိမိပါ၊ မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်၊ တဖက်သားအပေါ်ကို မိမိကဲ့သို့စိတ်ထားပြီး သနားကျင်နာရမယ်၊ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေး
တခွန်းကြောင့် သူများစိတ်အနှောက်အရှက်မဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ထိန်းသိမ်းပြောဆိုရမယ်၊ စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မှားပြီးရင်းမှားရင်းတွေ များသောအားဖြင့်ရှိကြပါတယ်၊ တချို့ဆိုရင်
မိဘတောင်ပြန်သတ်တာမျိုးရှိပါတယ်၊ ဒါလည်းစိတ်ကရှေ့ကသွားလို့သာဖြစ်တာပါ၊ ကံ(၃) ပါးမှာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံလို့ရှိပါတယ်၊ ကာယကံနဲ့ဝစီကံဟာ မနောကံ မဖြစ်ဘဲနဲ့ လုံးဝပြုလုပ်
ပြောဆိုလို့မရပါဘူး၊ မနောက(စိတ်)ထဲက ဖြစ်ပြီးမှသာ ပြုလုပ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်ပါတယ်၊ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တာက စိတ်သာလျှင်ရှေ့သွားရှိကုန်သည်၊ စိတ်သာလျှင်
အကြီးအမှူးရှိကုန်သည်၊ စိတ်ဖြင့်သာပြီးကုန်သည်၊ မကောင်းသောစိတ်ဖြင့်ပြောဆိုပြုလုပ်လျှင် လှည်းဘီးသည် ဝန်ဆောင်နွားခြေရာကို အစဉ်လိုက်သကဲ့သို့ မကောင်းမှူ့ ပြုလုပ်သူနောက်သို့
မကောင်းမှူ့သည် အစဉ်လိုက်သည်လို့ ဟောကြားခဲ့သလို ကောင်းမှူ့ပြုသူနောက်သို့လည်း အရိပ်သည်အစဉ်လိုက်သကဲ့သို့ ကောင်းမှူ့ချမ်းသာအစဉ်လိုက်သည်လို့ ဥပမာပေးဟောကြားတော်မှု
ခဲ့ပါတယ်၊ တချို့သောလူတွေ ပြောတာရှိပါတယ်၊ ဒီဘဝဒီကိုယ်စံ၊ နောင်ဘဝနောက်ကိုယ်ခံတဲ့၊ အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး၊ နောင်ဘဝလည်းဒီကိုယ်ဘဲခံရမှာပါ၊ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ ဥပမာအတိုင်း
ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းမှူ့ မကောင်းမှူ့ဟာ ကိုယ့်နောက်မှာထပ်ချပ်မကွာလိုက်နေမှာပါ၊ အားလုံးသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်တိုပလည်း ဘဝမြတ်ဖို့အတွက် စိတ်ထားကောင်းတွေ ထားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်ပါ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 4:070comments
2009년 2월 9일 월요일
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ စိတ်ကို သတိဖြင့်သဘာဝအကျဆုံး ထိန်းကျောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တရားဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် စိတ်သည်အရေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍတရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စိတ်ကို အမြင့်မြတ်ဆုံး
ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းရလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယထာဘူတ အမြင်မှန်ရရှိသူသာလျှင် ပညာဥာဏ်
ရရှိနိုင်၍ သစ္စာတရားကို သိမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ မူလအခြေခံအရင်းအမြစ်မှာ သစ္စာ ၄-ပါးတရားတော်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသစ္စာတရား၎-ပါးမှာ
(၁) ဒုက္ခသစ္စာ- ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား (၂) သမုဒ္ဒယသစ္စာ- ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းအမှန်တရား
(၃) နိရောဓသစ္စာ- ဆင်းရဲခြင်း၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရား(၄) မဂ္ဂသစ္စာ- ဆင်းရဲခြင်း၏ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့
ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းတို့၏ ဖြစ်ခြင်းဟူသောဇစ်မြစ်မှာ ခန္ဓာငါးပါး အစုအဝေးဖြစ်ရာဘဝပင်ဖြစ်သည်။
ဤဘဝမှာလည်းတဏှာ၏ မလွှဲမရှောင်သာသော အကျိုးတရားဆက်ပင်ဖြစ်သည်။အမှန်တရားကို မသိမှု
တည်းဟူသော အဝိဇ္ဇာကြောင့် ဘဝဖြစ်လာရသည်၊ တဏှာသမုဒယကြောင့် ဘဝတွေဆက်ကာဆက်ကာ
ဘယပြတ်စဲရန်မှာ ခန္ဓာငါးပါး ကုန်ဆုံးပျောက်ပျက်ခြင်းရှိမှသာ လျှင်ဖြစ်၏။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရားတော်ကို
ကျင့်ကြံအားထုပ်ခြင်းဖြင့် လူသား၏တဏှာလောဘစိတ်တို့ကို ခန်းခြောက်စေကုန်၏။ ထိုမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရား
တော်မှာ(၁) သမ္မာဒိဋ္ဌိ- မှန်ကန်သောအမြင်ရှိခြင်း၊(၂) သမ္မာသင်္ကပ္ပ- ကောင်းစွာမှန်သောအကြံကိုကြံခြင်း
(၃) သမ္မာဝါစာ-မှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်း၊ (၄)သမ္မာကမ္မန္တ- မှန်သောအမှုကိုပြုခြင်း၊ (၅) သမ္မာအာဇီဝ-
ရှိခြင်း၊(၈) သမ္မာသမာဓိ- မှန်သောတည်ကြည်ငြိမ်သက်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘ
ခန်းခြောက်ပျက်စီးမှသာလျှင် မဂ်ဖိုလ်တရား၎-ပါးသို့ ဆိုက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်၊ မဂ်ဖိုလ်တရား၎-ပါး
ဆိုက်ရောက်မှ နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလေသည်၊ တဏှာလောဘမှ မလွတ်မြောက်လျှင်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်။
မြတ်စွာဘုရား၏ အခြေခံတရားတော်အရ ပဋိသန္ဓေနေရခြင်းမှာ အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာ၏မှုလအကြောင်းအရင်း
ကြောင့်ဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့် သက္ကာယဒိဋ္ဌိမှ ပေါက်ဖွားလာသည့် သံယောဇဉ်တွယ်တာမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပဋိသန္ဓေနေခြင်းသည် ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်း၌သာ အဆုံးသတ်ရလေတော့သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် တပ်မက်စွဲလမ်းခင်တွယ်မှု အမျိုးမျိုးကိုပယ်စွန့်၍ သစ္စာလေးပါးအမြိုက်တရား
(သို့မဟုတ်) ဝိဇ္ဇာဥာဏ်ကို ထိုးထွင်းသိရှိနိုင်ရန် သတ်ပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကို အစဉ်မပြတ်ရှု့ပွားအားထုပ်ဘို့ရန်
မိမိ၏တပည့် သာဝကများအား ဟောကြားဆုံးမတော်မှုခဲ့လေသည်။
ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ လမ်းဆုံးပန်းတိုင်မှာ ဗောဓိဥာဏ်၊သို့မဟုတ် ဝိဇ္ဇာဥာဏ်၊သစ္စာဥာဏ်ရရှိမှုပင်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒုက္ခခပ်သိမ်းကင်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိစေရန်ပင်ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓတရားကျင့်စဉ်တရပ်လုံးမှာ သစ္စာအမှန်တရားကို ကောင်းစွာရှု့မြင်သည့်
ကျင့်စဉ်လုပ်ရပ်နည်းပင်ဖြစ်သည်။ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်၊ သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲသတိဖြင့် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာပေါ်တွင်
ရှုပွားနေခြင်းဖြင့် သင်္ခါရဓမ္မအားလုံးတို့၏ အဖြစ်အမှန်ဧကန်သဘာဝကို ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ
မိမိ၏ ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်အစုအဝေးကိုဖြစ်စေ၊ သူတပါး၏ရုပ်ခန္ဓာအစုအဝေးကိုဖြစ်စေ၊ တွေးတောဆင်ခြင်
ရှုပွားကြည့်လျှင် ထိုကိုယ်ခန္ဓာရုပ် အစုအဝေးတို့မှာ မတည်မမြဲဘဲ အနှစ်သာရအတ္တဝိဥာဏ်ဘာမှမရှိသော
သဘောရှိကြောင်း ဥာဏ်အမြင်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဤသဘောတရားသိမြင်ခြင်းသည် မျက်လှည့်ဆရာပမာ
အမြင်များမှု ဝိပ္ပလာသအပေါ် အခြေခံနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါ သူငါဟူသော သက္ကာရဒိဋ္ဌိတရားဆိုးကြီး
ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်စေသည့်ပြင်၊ ဒုက္ခများစွား သံသရာမှလည်း လွတ်မြောက်စေလေသည်။
လူသတ္တဝါတို့ သံသရာဘဝမှလွတ်မြောက်ဘို့ရန်နှင့် အဆက်မပြတ်ထပ်တလဲလဲ ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း
ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းဝေးဘို့ရန်အတွက်သစ္စာလေးပါးဖြစ်သော ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား။
ဆင်းရဲခြင်း၏ဖြစ် ကြောင်းအမှန်တရား ။ဆင်းရဲခြင်း၏ချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်တရား ။ဆင်းရဲခြင်း၏ ချုပ်ငြိမ်း
ရာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်းအမှန်တရာတို့ကို ထိုးထွင်း၍ ဧကန်သိမြင်နိုင်ဘို့ရန် မိမိကိုယ်ကို မိမိအားကိုး
အားထားပြုရမည်ဖြစ်သည် ။မိမိကိုယ်ကို မိမိမှတပါးအခြားမည်သူမျှ မကယ်တင်နိုင်ပေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း
တရားကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင်ပင်ကျင့် ကြံအားထုတ်မှသာ အမှန်စင်စစ်ရနိုင်မည်သာတည်း`။
ပု၈္ဂိုလ်တယောက်၏ အသိဥာဏ် တိုးတက်ပွားများလာအောင်အလို့ငှါ စိတ်ကို လေ့ကျင့်ရန်များစွာ
လိုအပ်ပေသည်။.ယင်းသို့အသိဥာဏ် တိုးတက်ပွားများလာရန် အလို့ငှာ ထိုစိတ်လေ့ကျင့်မှုကို နည်းလမ်းတကျ
ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမည်ဖြစ်သည် ၊၊ မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တွေ့သိမြင်လာမှသာ အမှန်တရားကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ပေသည်၊၊ယင်းသို့ဖြစ်၍ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဖြင့် မှန်သောအသိဥာဏ်
ကို ရရှိနိုင်ကြောင်း ထင်ရှားလှပေသည်၊။
ဗုဒ္ဓတရားတော်တွင် ကျွှန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ရှုမြင်ဆင်ခြင်ခြင်းတည်းဟူသော ကာယနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်
ကို၎င်း။ခံစားခြင်းကို ရှုမြင်ဆင်ခြင်ခြင်း တည်းဟူသော ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ကို၎င်း။ စိတ်၌ကျရောက်
ဖြစ်ပေါ်လာသော အစဉ်ကို ရှုမြင်ဆင်ခြင်ခြင်းတည်းဟူသော စိတ္တာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ကို၎င်း။
ဓမ္မသဘာယအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစဉ်ကို ရှုမြင်ဆင်ခြင်ခြင်း တည်းဟူသောဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်
ကို၎င်း။အစဉ်တစိုက် ရှု။မှတ်။ပွားများရ၏။။ စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ရာ၌ သတိတရားသည် အလွန်အရေးကြီးလှပေ၏။
စိတ်လေ့ကျင့်မှုတိုးတက်ရန် အတွက် နည်းလမ်းမှာ (၁)ကာယ။(၂)ဝေဒနာ။(၃)စိတ်။(၄)ဓမ္မတည်းဟူသော
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမှ သမ္မာသတိမဂ္ဂင်တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော သတိမြဲစေအပ်သည့် ဘာဝနာလေးမျိုးကို သတိ
ပဋ္ဌာန်ဟုခေါ်သည်။ သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့မှာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအကျင့်၌ အဓိကဖြစ်သောအကျင့်တရားများဖြစ်
ပေသည်၊ထိုတရားများကို ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအားလုံးကိုကျင့်သည်မည်ပေတော့၏
ထိုသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကို ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည် အေးငြိမ်းရာဖြစ်သော ချမ်းသာသုခကိုရရှိ၍
သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်သည်သာ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရန်တစ်ကြောင်းတည်းသောလမ်းဟူ၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောတော်
တကြောင်းတည်းသာဖြစ်သော ဤမဂ်ခရီးသည် သတ္တဝါတို့ကိုကိလေသာအညစ်အကြေးမှ စင်ကြယ်ခြင်း
ှငှါ။ စိုးရိမ်ငိုကြွေးခြင်းတို့ကို လွန်မြောက်ခြင်းငှါ။ ဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာယာခြင်တို့မှ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှါ။
အရိယာမဂ်ကိုရခြင်းငှါ။ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းငှါဖြစ်၏၊ ထိုမ၈်ခရီးသည် လေးပါးသော သတိပဋ္ဌာန်တရား
ပင်တည်းဟု မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်သာဝကတို့အား ဟောကြားမိန့်မြွက်တော်မူခဲ့၏။
ဖြစ်စေ။ စိတ်အာရုံမျိုးစုံပြုပြင်မှုသခ်ါရကိုဖြစ်စေ။ အသိစိတ်ဝိညာဏ်ကိုဖြစ်စေ ခွဲစိတ်ပိုင်းခြား၍သော်၎င်း။
အခြားအနုစိတ်နည်းအားဖြင့်သော်၎င်း။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ကြည့်လျှင် အတ္တ ငါ ဆိုသည်မှာမည်သည့်နေရာမှာ
မျှ ရှာဖွေ၍မတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း နောက်ဆုံး၌အမှန်ကိုသိမြင်လာပေလိမ့်မည်၊မိမိထင်မြင်ယူဆခဲ့သည့် ငါ .
သို့မဟုတ် ကိုယ်အကောင် ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်အစုအပေါင်း၏ အမည်သညာမျှသာဖြစ်သည်၊ဤအတ္တ
ငါ .ဟူသောသက္ကာယအစွဲမှာ သစ္စာအမှန်တရားကို တွေ့မြင်ရာလမ်းကြောင်းတွင် အလွန်တရာအများဆုံး
အချင်း ရောဟိတဿနတ်သား လောက၏ အဆုံးနိဗ္ဗာန်ကို မရောက်ဘဲ ဆင်းရဲ၏အဆုံးပြုခြင်းကို
လည်း ငါဟောတော်မမှုအချင်းနတ်သားစင်စစ်အားဖြင့်သညာလည်းရှိစိတ်လည်းရှိသော တလံ မျှလောက်သော
ဤခန္ဓာကိုယ်၌ လောက (ဒုက္ခသစ္စာ)ကို၎င်း လောက၏ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း(သမုဒယသစ္စာ)ကို၎င်း လောက၏
ငါပညတ်တော်မူ၏။ဟု သံယုတ် ၃.နာနာတိတ္တိယဝဂ် ၆။ရောဟိတဿသုတ်၌ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။။
ဤစာအုပ်တွင် ကျေးဇူးရှင် တောင်ပုလုတောရ ကမ္ဘာဧဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် အားထုတ်၍
ဟောကြားတော်မူသော ဆံပင်အစရှိသည့်ရုပ်အပေါင်၌ဖြစ်သော ကာယဂတာ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နည်းလမ်း
သည်၎င်း ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည်။ အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာဘာသာပြန် ကာယဂတာသတိဝဂ်
နှင့်အမတဝဂ်ပါ သုံးဆယ့်နှစ်ကောဋ္ဌာသ ကာယဂတာ သတိပဋ္ဌာန်ပွားများခြင်းမှ အမှန်ဧကန်ရရှိသည့် ကျေးဇူးများကိုဖေါ်ပြသည့် ကောက်နုတ်ချက်များသည်၎င်း။ ပါရှိပါသည်။။ ပထဝိ ၂၀ နှင့် အာပေါ ၁၂ ပါဝင်သည်သုံးဆယ့်နှစ်ကောဋ္ဌာသကိုသုံးဆယ်သုံးစုခွဲစိတ်ပြီးပြထားရာ တစုတစုကိုအနည်းဆုံး ငါးရက်ကြာမျှ
ပွားများရမည်ဖြစ်ပါသည်။။ ပါဠိဘာသာဖြင့် ကောဋ္ဌာသဟုခေါ်သော ၃၂-ပါးသောကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း
အစုအပုံတို့ကိုဆံပင်ကစ ကျင်ငယ်ကျအောင်နှုပ်တိုက်ရအောင် ကောင်းစွာကျက်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။။ထို့ပြင်
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤစာအုပ်တွင်ရှင်းပြတော်မူသော ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအားထုတ်ရန် စည်းကမ်းနည်းလမ်း
ထိုသို့သရဇ္ဈာယ်ခြင်းအားဖြင့်စီးဖြန်းရှုပွားသော် ကမ္မဋ္ဌာန်း၏ကောဋ္ဌာသနိမိတ်တို့သည် ပိုသည်ထက်
ပိုပြီး ထင်လွယ်မြင်လွယ်ခြင်းအဖြင်သို့ရောက်ရှိလာ၏။။ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည့်ပျက်စီးတတ်သောခန္ဓာကိုယ်၏
သဘောကိုလည်း ပိုမိုပွားများရှုမြင်ခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာ၏ ။စိတ်ကိုလည်းဟိုဟိုဒီဒီလွင့်ခြင်းမှတားမြစ်
သမာဓိကိုလျှင်မြန်စွာရရှိနိုင်ခြင်းအလို့ငှါမြတ်စွာဘုရားသည်ကာယာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ကို မူလအ
ခြေခံကမ္မဋ္ဌာန်းအဖြစ်ဖြင့်အဓိကထား၍သွန်သင်ဟောကြားတော်မူလေသည်။။ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်း၏ အနက်
ဋ္ဌာသ အပိုင်းအစိတ်တို့ကိုလည်း ပွားများအားထုတ်ရန်အလို့ငှါ ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံများဟူ၍အမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။။
အတူတကွယှဉ်တွဲ၍ အကျုံးဝင်ကာဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ တခုကိုရှုမှတ်ပွားများနေသောယောဂီသည်အခြား
နုပဿနာများကိုလည်း ဆက်လက် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည် ။။ အကြောင်းမူကား ထိုကာယနုပဿ
နာ သတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုပွားခြင်းသည် ထိုဆိုခဲ့သည့် အခြားသုံးပါးသော သတိပဋ္ဌာန်တို့ကိုလည်း ဆက်လက်ရှုပွား
ကိုယ်ကာယ၏ ကောဋ္ဌာသများကိုနှုတ်ဖြင့် ဆံပင်မှကျင်ငယ်အထိရွတ်ဆိုပွားများစဉ်အခါ၌ပင်စိတ်အာရုံဖြင့်
လည်းဥာဏ်ပေါ်နေအောင်နှလုံးသွင်း၍ ရှုပွားခြင်းကိုပြုရပေသည်။။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဖြင့်နှလုံးသွင်းရန်ရရှိဘိုအာနိ
သင်အတွက် နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုပွားများခြင်းသည်။။ လိုရင်းပဓာနအချက်ဖြစ်ပေသည်။။ နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုပွားများသ
ရဇ္ဈာယ်ခြင်းသည်စိတ်ဖြင့်ရှုပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်၏။။ စိတ်ဖြင့်ရှုပွားရခြင်းသည်ကောဋ္ဌာသများ၏ မတင့်
တယ်သော အသုဘလက္ခဏာသဘောကို ထိုးထွင်း၍သိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်၏ ဟူသော ဒေသနာ
လေးပါးသောသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွင် သက်ဆိုင်ရာကမ္မဋ္ဌာန်းများအနက် ဆံပင်မှကျင်ငယ်အထိ ကိုယ်
ကာယ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ကောဋ္ဌာသအပေါင်းအစုတို့ကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရသော ကာယဂတာ
သတိပဋ္ဌာန်သည်ထူးကဲမွန်မြတ်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သည်ဟူ၍အမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးလေသည်။။ သုတ္တန်ဒေသ
နာတော်နှင့်အင်္ဂုတ္တိုရ်နိကာယ်များအရ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်၊၊ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအကျင့်၌လိုအပ်ဆုံး
သော ကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းတခုအနေဖြင့်ဟောဖော်ညွှန်ပြတော်မူ၍ တပည့်သာဝကများဖြစ်ကြသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်
ကာလများ၌ဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခြင်းမရှိပေ။ဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါကာလ သာသနာတော်အတွင်း၌သာ ထိန်
ထိုကာယဂတာသတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ကာယာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်၏အားလုံးသောပုဗ္ဗအပိုင်းတို့၌မူလ
အခြေခံကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်တကြောင်း။ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်းတမျိုးတည်းကို ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပင် အရိ
ယာအဖြစ်သို့ ဧကန်မုချရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်တကြောင်း။ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုကာယဂတာသတိပဋ္ဌာန်ကို
(ဧကောဓမ္မော)တခုတည်းသောတရားဟူ၍ မြွက်ဟဟောကြားတော်မူလေသည်။။ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်း
ထိုသို့သော သုတ္တန်ပါဠိတော်၌ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသည်မှာ။ရဟန်းတို့ တခုတည်းသောတရားကို ပွားစေ
အပ်သည်ရှိသော်။ ကြီးမားစွာသောထိတ်လန့်မှုဖြစ်ခြင်းငှာ။ ကြီးမားစွာသောသံဝေဂကိုရရှိခြင်းငှာ။ ကြီးမားစွာ
သောအစီးအပွားအလိုငှာဖြစ်၏။။ သံယောဇဉ်အနှောင်အဖွဲ့မှ များစွာလွတ်ငြိမ်းပြတ်စဲစေရန်အလို့ငှာ။ ကြီးမား
စွာသောသတိသံမ္ပဇဉ်ကို ရရှိခြင်းအကျိုးငှာဖြစ်၏။။ ဝိပဿနာဥာဏ်ကိုရရှိခြင်းငှာ မျက်မှောက်သောကိုယ်၏
အဖြစ်၌ ချမ်းသာစွာနေရခြင်းငှာ။ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာဖြစ်၏။။ ထိုတခုတည်းသောတရားဟူ
သည်အဘယ်နည်း။ ထိုကာယဂတာသတိကမ္မဋ္ဌာန်းပင်တည်း။။ အကြင်သူတို့သည်။ထိုကာယဂတာသတိကမ္မ
မသုံးဆောင်ကုန်။ ထိုသူတို့သည်သေခြင်းကင်းသော အမြိုက်နိဗ္ဗာန်၏အရသာကိုပွားများသောအားဖြင့်မသုံး
ဆောင်ကြရကုန်။အကြင်သူတို့သည် ထိုကာယဂတာသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားစီးခြင်း၌ ပြည့်စုံစေအပ်၏။။ ထိုသူ
တို့သည်သေခြင်းကင်းသော အမြိုက်နိဗ္ဗာန်၏အရသာကို သုံးဆောင်အပ်ကုန်ပြီ။ မယုတ်ညံ့။ မချွတ်ယွင်း။
မချွတ်ချော်ကြကုန်။။ အကြင်သူတို့သည်ကာယဂတာသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမပွားစီးကြကုန်။ ထိုသူတို့သည်သေခြင်း
ကင်းသောအမြိုက်နိဗ္ဗာန်၏အရသာကို မသုံးဆောင်အပ်ပြီ။ ယုတ်ညံ့လေပြီ။ ချွတ်ချော်ကြလေကုန်ပြီ။။
ထို့ကြောင့်ကာယ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ကောဋ္ဌာသတို့ကိုအစဉ်အတိုင်း အသွားနည်း အပြန်နည်းအား
ဖြင့် ရက်စဉ်အတိုင်းပွားများသွားပါက ၁၆၅ -ရက်ပြည့်လျှင် ပွားစဉ်တကြိမ် ပြီးစီးသွားလေသည်။။ ဤသို့အား
ဖြင့် ထာဝစဉ်အမြဲ ပွားများအားထုတ်သွားရန်ဖြစ်လေသည်။။ ဥပမာ ဆံပင်။ မွေးညှင်း။ ခြေသည်း။ လက်သည်း။
သွား။အရေ။ဖြစ်သည့် တစပဉ္စက ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ရှုပွားခြင်းအားဖြင့်ပင်မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ရရောက်ကြကုန်သော
ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အလွန်များပြားလှသဖြင့် ဂဏန်းနှင့်ပင်ရေတွက်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်။ ထိုသို့သရဇ္ဈာယ်ရှုပွားခြင်း
အားဖြင့် ပွားစီးသောကမ္မဋ္ဌာန်း၏ ကောဋ္ဌာသနိမိတတို့သည်ပိုသည်ထက်ပို၍ ထင်လွယ်မြင်လွယ်ခြင်းအဖြစ်သို့
ရောက်ရှိလာသော်စိတ်ကိုလည်း ထိုမှဤမှပြန့်လွင့်ခြင်းကို တားမြစ်နိုင်ပြီးလျှင်။ကောဋ္ဌာသတို့လည်းပိုမို၍
ထိုပြင် မဟာသတိပဋ္ဌာနံပန ဝိပဿနုတ္တရံနာမကထိကံ ကာယဂတာသတိသုတ္တံ သမထုတ္တရံ(မဇ္ဈိမပဏ္ဏာ
သ။အဋ္ဌကထာ၃။၁၀)ဟူ၍ အဋ္ဌကထာဆရာမြတ် မိန့်ဆိုသည့်အတိုင်း မဟာသတိပဌာန်တရားကို ဝိပဿနာ
ကျင့်စဉ်တွင် အမြင်မြတ်ဆုံး ဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်း။ ကာယဂတာသတိသုတ္တံကိုလည်း သမထကျင့်စဉ်တွင် အမြင့်
မြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်း။ ဟောကြားတော်မူသည်။။သို့ဖြစ်ပါ၍ သွား။ရပ်။ထိုင်။လျောင်းက္ကရိယာပုတ်လေးပါး
နှင့်နေသည့်အခါကျွှန်ုပ်တို့သည် သတိတရားလက်ကိုင်ထား၍ သံသရာမှလွတ်မြောက်ရာကျင့်စဉ်ဖြစ်သော ကာ
ရဟန်းတို့သင်တို့အားယ္ခုငါဘုရားမိန့်မှာတော်မူခဲ့အဲ့။ ပြုပြင်အပ်သောသင်္ခါရတရားတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိကုန်၏။။မမေ့မလျော့အပ်သောသတိတရားဖြင့်ပြည့်စုံစွာနေကြကုန်လော့။(ကိစ္စပြီးစီးအောင်အားထုတ်ကြကုန်လော့)ဟုသတိတရားကိုလက်ကိုင်ထားရန်မြတ်စွာဘုရားက နောက်ဆုံးမိန့်
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 8:420comments
ချမ်းသာအပေါင်း၊ ရကြောင်းမှန်စွာ ၊
လှူတတ်လျှင်မြတ်သည်၊ အလှူပေးသူဌေးဖြစ်ဟူသော စကားများရှိပါသည်။
အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်၊ လှူဘွယ်ဝတ္ထု၊ အလှူရှင်ရဲ့စိတ်စေတနာ စသည်တို့ကွဲပြားသည်နှင့်အမျှ အကျိုးပေးလည်း
ကွဲပြားသွားပါတယ်၊ အားလုံးလည်းကြားဖူးကြမှာပါ၊ ညောင်းစေ့လေးလောက်လှူသော်လည်း ညောင်ပင်ကြီး
ဟူသောစကား၊ ဒီစကားကမှန်ပါသည်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လှူတဲ့သူရဲ့စိတ်စေတနာတွေ ကွဲပြားတဲ့အတွက်
ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်၊အလှူရှင်စိတ်စေတနာ၊ လှူဘွယ်ဝတ္ထု၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးတွေ စင်ကြယ်
မြင့်မြတ် မှန်ကန်စေရန် ရည်ရွယ်ပြောဆိုထားတဲ့စကားလည်းဖြစ်ပါတယ်၊
မြတ်စွာဘုရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် အလောင်းတော်ဘဝတွင် ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရာ၌ ဒါနပါရမီကို ရှေးဦးစွာ
ဆောက်တည်တော်မှုခဲ့ပြီး ဘုရားဖြစ်တော်မှုသာအခါ ပါရမီဆယ်ပါးတွင် ဒါနပါရမီကို ဦးစွာဟောတော်မှုခဲ့သည်။
ဒါနပါရမီကို များစွာသောလူတိုင်း ပြုကျင့်နိုင်ကြပါသည်၊ သို့သော်စိတ်ထားတတ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါသည်၊။
ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့သည် ကံ-ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သည့်အားလျှော်စွာ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ
လှူဒါန်းသည့်ဓလေ့သည် ရှိပြီးဖြစ်နေပါသည်၊ ထို့ကြောင့်မိမိတို့လှူဒါန်းသော အလှူဒါနအပေါ်တွင် အဓိကက
စိတ်ထားတတ်ဖို့ နောက်မိမိတို့လှူဒါန်းတဲ့ အလှူရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေ သိထားစေဖို့၊ ကိုယ်လှူဒါန်းလိုက်သည့်
အလှူအပေါ်ပီတိသုခဖြစ်စေဖို့အတွက် သာသနာရေးဝန်းကြီးဌာနမှ ထုပ်ဝေသော စာအုပ်မှ ရေးသားကုသိုလ်
မြတ်စွာဘုရားသည် အလှူဒါနကို ဟောတော်မှုရာ၌ မိမိပြုလုပ်သော အလှူဒါနကြောင့် သတ္တဝါတို့
သေကြေပျက်စီးမှု မရှိစေရန် ဟောတော်မှုပါသည်။အလှူအတန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မလိုအပ်ဘဲ ဗုံးပေါလအော
လှူဒါန်းမှုမျိုးကိုလည်း အားပေးတော်မမှုပေ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လိုအပ်သမျှ ပမာဏအထိသာလျှင်
အလှူခံသင့်သည်ဟု ဟောတော်မှုပါသည်။ မိမိအင်းအားအလိုက် လေးပုံတစ်ပုံသာလှူဒါန်းရန် ဟောတော်
မှုပါသည်။ အလှူဒါနကြောင့်ဘဝပျက် နစ်နာသွားစေမည့် ပကာသနများကို လိုလားတော်မမှုပေ။
အထူးသဖြင့် သာသနာတော်တွင် ထာဝရအကျိုးရှိစေမည့် အလှူမျိုး မိမိသီတင်းသုံးရာကျောင်း၊အာရာမ်
မြို့ရွာနယ်ပယ်နှင့် အမျိုးဘာသာသာသနာနှင့် လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို အရှည်တည့်တံ့ကောင်းကျိုးတိုးပွားစေ
မည့် ထာဝရဒါနမျိုးကို အားပေးတော်မှုပါသည်။
အလှူဟူသည် နတ်ပြည်၏စောင်းတန်းလှေခါးဖြစ်၍ မြတ်သောရိက္ခာထုပ်ဖြစ်သည်။ခရီးဖြောင့်တန်းသည်။
မြတ်သော မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်၏အကြောင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏။ စည်းစိမ်ချမ်းသာကို ပေးတတ်၏။
မိမိကိုယ်ကိုစောင်မတတ်၏။ မယဉ်ကျေးသူတို့ကိုလည်း ယဉ်ကျေးစေတတ်၏။ အလုံးစုံသောအကျိုးကို ပြီးစေတတ်၏။
ကံကံ၏အကျိုးကို သိမြင်ယုံကြည်ကာ စေတနာသုံးတန် ပြည့်ဝစွာ လှူဒါန်းသောဒါနသည် သံသရာအတွက် မိတ်ဆွေကောင်း
အလှူဒါနနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် စေတနာသည် မပါမပြီးအရေးကြီးပါသည်။စေတနာမရှိလျှင် မလှူဒါန်းနိုင်။စေတနာရှိမှသာ လှူဒါန်း
နိုင်ပါသည်။ စေတနာဆိုရာမှာလည်း ပုဗ္ဗ၊ မုဉ္စ၊ အပရဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။
မလှူဒါန်းမီ ရှေ့အဖို့၌ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းရှာဖွေရာ အခါမှစ၍ ငါသည် လောကီလောကုတ္တရာများစွာသော စည်းစိမ်း၏
အကြောင်းဖြစ်သော အနုဂါမိက(ဘဝစဉ်ဆက် လိုက်တတ်သော) အလှူကုသိုလ်ပြုရတော့မည် စသည်ဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ
လှူဖွယ်ပစ္စည်း အစုအစုကို အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လက်တွင် ထည့်၍စွန့်လွတ်လှူဒါန်းသောအခါ အနှစ်သာရမရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာမှ
အနှစ်သာရရှိသော ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကို ထုတ်ယူနေပါတကား ဟုစိတ်ကြည်လင် ရွှင်ပြစွာ လှူဒါန်းမှုသည် မုဉ္စစေတနာမည်၏။
ပေးလှူပြီးနောက် ငါသည် ပညာရှိတို့ ချီးမွှမ်းအပ်သော လှူဒါန်းမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ရပေပြီ ကောင်းလေစွ ဟုအဖန်ဖန်
အထပ်ထပ် အောက်မေ့အမှတ်ရကာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေခြင်းသည် အပရစေတနာမည်၏။
ထို့ပြင် အလှူဒါနအကျိုးကြီးမား ထက်သန်ရေးအတွက် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်း အင်္ဂါလက္ခဏာများနှင့်ပြည့်စုံရန် အရေးကြီး
ပါသည်။ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟကင်းရန် ကျင့်ကြံပြီး ကျင့်ဆဲဖြစ်တော်မှုကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့မှာ အကောင်းဆုံးသော အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်
မြတ်များဖြစ်ပါသည်။ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ သာမန်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သာဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့လျှင် အလှူပေးသူနှင့်အလှူခံသူနှစ်ဦးနှစ်ဘက်
အလှူနှင့် စွန့်ကြဲမှု( ဒါနနှင့်စာဂ)
အနာဂတ်သံသရာတွင် ခံစားရမည့်အကျိုးကို မြှော်မြင်၍ လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို စွန့်လှူသည်ကား ဒါနမည်၏။
မျက်မှောက်ဘဝအကျိုးကိုသာ မျှော်၍မိမိလက်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ဆုလာဘ်ပစ္စည်းများကို ပေးစွန့်ကြဲခြင်းစသည်ကား
ပရိစ္စာဂ မည်၏ဟူ၍ ဒါနနှင့် ပရိစ္စာဂ အထူးကို ခွဲခြားဖွင့်ကြပေသည်။ ဒါနဟူသည်...
(၄)ထင်ရှားရှိနေသောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ဤအင်္ဂါလေးပါးရှိမှ ပြည့်စုံ၏။
မိမိပိုင်ပစ္စည်းကို သူတပါးအား လွှဲအပ်မှုကို ပေးလှူသည်ဟုခေါ်၍ မိမိပိုင်ပစ္စည်းကို သိမ်းပိုက်လိုခြင်း
စိတ်သဘောထားကို ပယ်ရှားလိုက်လျှင် စွန့်သည်ဟုခေါ်၏။ သို့သော် မည်သူမဆို မိမိပစ္စည်းကို သူတစ်ပါးအား
ပေးကမ်းရာတွင် စွန့်လွှတ်ခြင်း ပရိစ္စာဂသဘော ရှေးဦးဏွာဖြစ်စေပြီးမှ ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့်
ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရာ၌ ပေးကမ်းခြင်းဒါနဖြစ်လျှင် စွန့်ကြဲခြင်း ပရိစ္စာဂလည်းဖြစ်တော့သည်သာတည်း။...
အလှူဒါနသည် အမျိုးအစားအားဖြင့် များစွာရှိရာ အဓိကအားဖြင့်-၃မျိုးရှိသည်။၎င်းတို့မှာ-
(၁) သုတ္တန်ဒေသနာနည်းအရ အလှူဒါန
(၂) ဝိနည်းဒေသနာနည်းအရ အလှူဒါန
(၃) အဘိဓမ္မာဒေသနာနည်းအရ အလှူဒါန တို့ဖြစ်ကြသည်။
(၁) အန္နဒါန - ဆွမ်းထမင်း အစားအစာအလှူ
(၂) ပါနဒါန - သောက်ရေအဖျော် ယမကာအလှူ
(၃) ဝတ္ထုဒါန - အဝတ်အထည် သင်္ကန်းစသည်အလှူ
(၄) ယာနဒါန - ဖိနပ်စသော ယဉ်အလှူ
(၅) မာလဒါန - ပန်းမျိုးစုံအလှူ
(၆) ဂန္ဓဒါန - နံ့သာခဲ၊ နံ့သာတုံး၊အမွှေးတိုင်အမျိုးမျိုးအလှူ
(၇) ဝိလေပနဒါန - နံ့သာပျောင်း၊နံ့သာရည်အမျိုးမျိုးအလှူ
(၈) သေယျာဒါန - ညောင်စောင်း၊အင်ပျဉ်အိပ်ယာနေရာအမျိုးမျိုးအလှူ
(၉) အာဝါသဒါန - ကျောင်း၊ ဇရပ်၊သိမ်၊ ဓမ္မာရုံ စသည့်အမျိုးမျိုးသောအလှူ
(၁၀) ပဒိပေယျဒါန - ဆီးမီးအမျိုးမျိုးအလှူ
(၁) စီဝရီဒါန- သင်္ကန်းအလှူ၊
(၂) ပိဏ္ဍပါတဒါန- ဆွမ်းဘောဇဉ်အလှူ၊
(၃) သေနာသနဒါန- ကျောင်းအိပ်ရာနေရာအလှူ၊
(၄) ဘေသဇ္ဖအလှူ- ဆေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအလှူ။
(၁) ရှုပဒါန- အဆင်းအမျိုးမျိုး ရှုပါရုံအလှူ၊
(၂) သဒ္ဒဒါန- အသံအမျိုးမျိုး သဒ္ဒါရုံအလှူ
(၃) ဂန္ဓဒါန- အနံ့အမျိုးမျိုး ဂန္ဓာရုံအလှူ၊
(၄) ရသဒါန- စားဖွယ်သောက်ဖွယ်အမျိုးမျိုး ရသာရုံအလှူ၊
(၅) ဖောဋ္ဌဗ္ဗဒါန- သင်္ကန်း ကျောင်းစသောအထိအတွေ့အလှူ၊
(၆) ဓမ္မဒါန- တရားဟောခြင်း၊ သင်ကြားပို့ချခြင်းစသော အသိဥာဏ်အမျိုးမျိုးပေးသည့် ဓမ္မာရုံအလှူ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오전 3:080comments
(၁) သေမင်းကိုကွဲ့၊ မိတ်ဆွေဟဲ့၊ ဖွဲ့၍မရချေ။
(၂) မသေလိုပြန်၊ လာဘ်ထိုးခံ၊ အမှန်မရချေ။
(၃) မရဏဆိုး၊ သေမင်းမျိုး၊ စစ်ထိုးမရချေ။
(၄) သေမင်းကိုမှု၊ ပြိုင်သည့်လူ၊ နိုင်သူမရှိချေ။
(၅) သေမင်းထံမှောက်၊ လူတိုင်းရောက်၊ သက်ပျောက် ဇီဝိန်ကြွေ။
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 8:570comments
(၁) နုနယ်ရုပ်ဆင်း၊ ပျိုမျစ်ခြင်းကား၊အိုမင်းနောက်ဆုံး ရှိချေ၏တကား။
(၂) ဥစ္စာဆင်မြင်း၊ ပေါများခြင်းကား၊ ယိုယွင်းနောက်ဆုံးရှိချေ၏တကား။
(၃) ချစ်ခင်ပေါင်းသင်း၊ ဆက်ဆံခြင်းကား၊ ကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိချေ၏တကား။
(၄) ဝိဥာဉ်ထင်လင်း၊ သက်ရှည်ခြင်းကား၊ သေမင်းနောက်ဆုံးရှိချေ၏တကား။
(၅) တက်ကြွားကြွကြွ၊ မြင့်လွန်းကလည်း၊ လျှောကျနောက်ဆုံးရှိချေ၏တကား။
(၆) ခင်မင်ခယ၊ ချစ်လွန်းကလည်း၊ သောကနောက်ဆုံး ရှိချေ၏တကား။
(၇) ပွဲလယ်ပြင်ပ၊ ချီးမွမ်းကြလည်း၊ ရှုတ်ချနောက်ဆုံး ရှိချေ၏တကား။
(၈) ကြည်သာရွင်ပျ၊ ချမ်းသာကြလည်း၊ ဒုက္ခနောက်ဆုံး ရှိချေ၏တကား။...
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 8:430comments
(က) ကံလျှင်ဥစ္စာ၊ သတ္တဝါ၊ သူငါရှိကြသည်။(ကမ္မသကာ)
(ခ) ကံလျှင်အမွေ၊ ခံစံပေ၊ ခွဲဝေယူကြသည်။( ကမ္မဒါယကာ)
(ဂ) ကံလျှင်အကြောင်း၊ ဆိုးအကောင်း၊ အပေါင်းမှန်လှပေ။(ကမ္မယောနိ)
(ဃ) ကံလျှင်ဆွေမျိုး၊ ကောင်းအဆိုး၊ ကြောင်းကျိုးမှန်လှသည်။(ကမ္မဗန္ဓု)
(င) ကောင်းဆိုးကံသာ၊ ကိုးကွယ်ရာ၊ သေချာမှန်လှသည်။(ကမ္မပဋိဿရဏ)
မာဂဓီသာစည် လောကီဗဟုသုတများ စာအုပ်မှ...
Posted by ဆရာလေး(ရေနံချောင်း) at 오후 8:330comments
မဟာဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်ဖိုင်-ဆဋ္ဌမတွဲ- ပထမပိုင်းနှင့် ပထမတွဲ- ပဌမပိုင်း ဓမ္မဒါနပြုပါသည်
ဓမ္မပဒ-မြန်မာပြန်- ၁ မှ ၂၆ ထိ အစဉ်အတိုင်းကူးယူနိုင်ပါသည်
လူ့ဘဝဂုဏ်ရည် ကြီးမြတ်သောအောင်ပွဲ ယမမင်းစစ်ခန်း ကံဖြတ်ကြစို့ လူပီသပါပြီလား တူသောအကျိုး လှူတတ်ပါစေ ဒို့အားလုံး၏ဆရာ